7/21/2014 08:27:00 PM articles
ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့် အမြင်သာဖြစ်လို့ သဘော ထား တိုက်ဆိုင်ချင်မှ တိုက်ဆိုင်ပါလိမ့် မယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောရမယ့်ကိစ္စမို့ လို့ ပြောရ တာပါ။ မကြာသေးခင်ကမှ ကျင်းပပြီးစီး သွားတဲ့ မြန်မာနဲ့ထိုင်း ရိုးရာလက်ဝှေ့ ပွဲကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အခမဲ့ပြသခဲ့လို့ လူတိုင်းလောက်နီးနီး ကြည့်လိုက်ရမှာပါ။ ပွဲစဉ်ေ တွရော၊ လက်ဝှေ့သမားတွေပါ စွဲမက်စရာချည်းပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း အားကစား သမားဖြစ်ခဲ့တာမို့ ဒီကစားပွဲကို အလွန်နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေ ကိုယ်တိုင် လက်ဝှေ့ဝါသနာအိုးမို့ လက်ဝှေ့ပွဲကို ကျွန်တော်တို့ စွဲလန်းတာသိပ်တော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး။
လက်ဝှေ့ပွဲဆိုတာ ရန်သူနှစ် ယောက်က စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရှင်နှစ်ဦးက ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို အတူရေးဆွဲကြသလို အနုပညာဆန်လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါသမောဟပါတဲ့သူဟာ ရှုံးနိုင်ခြေများလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ထိုးသွားတဲ့ စိုးလင်းဦးရဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲအကြောင်းပြောချင်တာပါ။ စိုးလင်းဦးဟာ ကျွန်တော် သာ မက တစ်နိုင်ငံလုံး အသည်းကျော်လက်ဝှေ့ သမားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိုးလင်းဦး ဟာ ကြောက်စိတ်ကင်းတယ်။ မာရည် မြင့်တယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ လူကောင် ကွာပါစေ။ နောက်မဆုတ်တမ်း ထိုးတတ်တဲ့အပြင် ထိုးသတ်ပုံ အင်မတန်မှကို သန့်ရှင်းရိုးသားပါတယ်။
အဲဒီနေ့မှာ သူဟာ ထိုင်းလက်ဝှေ့ ကျော် ‘ပါဝိ’ နဲ့ ထိုးသတ်ရပါတယ်။ ပါဝိဆိုတာကလည်း သိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာအကြိုက်ဆုံး နိုင်ငံခြားသား လက်ဝှေ့ သမား ပါ။ မြန် မာနိုင် ငံက နာမည်ကြီးလက်ဝှေ့သမား အတော်များများ နဲ့ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး မြန်မာအကြိုက်ဆုံး နိုင်ငံခြားသား လက်ဝှေ့ သမားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ပွဲက ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ လူတိုင်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပွဲဟာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြောပြပါ့မယ်။ အဲဒီပွဲမှာ စိုးလင်းဦးဟာ ပါဝိကိုသုံးချီမှာနှစ်ကြိမ် အမှတ်စဉ်ရေတွက်ရသည်အထိ ထိုးလှဲထားပြီးပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ခုံဒိုင်ဆိုတဲ့သူက တားပြီး ”စိုးလင်းဦးက ပါဝိကို အလဲထိုးအနိုင်ယူရင် ဆယ့်ငါးသိန်းထပ်မံ ဆုချမယ်” ဆိုပြီးကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကစပြီး ပွဲကပရမ်းပတာ ဖြစ်တော့ တာပါပဲ။ ပထမအကြိမ် စိုး လင်းဦးလက်နဲ့ ပါဝိမျက်လုံးခိုက်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်။ တကယ်လည်း ခိုက်မိသွားတယ်။ ဒါကို ပရိသတ်က ပါဝိအမူပိုတာလို့ မြင်တယ်။ ထားပါ။ မမြင်ရတဲ့ အနေအထားကိုး။
နောက်တစ်ကြိမ် စိုးလင်းဦးက ပါဝိရဲ့မတော်ရာကို ဒူးနဲ့ တိုက်ပြီး တစ်ချက်ထပ်ကန်ထည့်လိုက်တယ်။ ဒါလည်းထားဦး မတော်တဆပေါ့။ အရှိန်လွန်သွားတာပေါ့။ ဒါ့ အပြင် လေးချီအပြီး ခေါင်းလောင်းသံကြားပြီးမှ စိုးလင်းဦးဟာ ပါဝိကို နှစ်ချက်ဆက်ထိုးပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ များပြီပေါ့ဗျာ။ ကဲ..ဒါလည်းထားဦး။ ငါးချီရောက်တော့ စိုး လင်းဦးဟာ နိုင်ချင်စိတ်များပြီး ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းတောင် သိပုံမပေါ်တော့ဘူး။ အကွက်တွေ ပျောက်ပြီး ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း တောင် မသိအောင်ပါပဲ။ တစ်ဖက်ပြိုင် ဘက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲလဲလဲ။ မလဲလဲအောင်လုပ်ဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ငါးချီအပြီး ဒိုင်အတားမှာမှ ခြေနဲ့နှစ်ချက်ဆင့်ခတ်ပြီး ခေါင်းနဲ့ပါ တစ်ချက် တိုက် ချ လိုက်ပါတော့တယ်။
ဆိုပါတော့ဗျာ။ သုံးချီမှာ နှစ်ခါကျအောင် ထိုးလှဲထားတဲ့ လက်ဝှေ့သမားဟာ နောက်တစ်ခါကျအောင် ထိုးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်မှ မခဲယဉ်းတော့ပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အချိန်မှာ အလဲထိုးရင် ဆုတော်ငွေ ဆယ့်ငါးသိန်းဆိုတာက သူ့စိတ်ကို ပြောင်းလဲသွားစေတော့တာပါပဲ။ သူဟာ ပြိုင်ဘက်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ နိုင်နိုင်၊ နိုင်ဖို့သာ အဓိက ဖြ စ်ပေါ်သွားတာပါပဲ။ ဒီတော့ သူဟာပြိုင်ဘက်ကို ရန်သူလိုသဘောထား မိသွားပါပြီ။ ဒီတော့ပြိုင်ပွဲဟာ အဲဒီဆုကြေးငွေပေါ်လာတာနဲ့ ပရမ်းပတာစ ဖြစ်ပါပြီ။
ဆုပေးသူ(ကုမ္ပဏီနာမည် မပြောတော့ပါဘူး။) ကလည်း မြန်မာကို နိုင်စေချင်လို့ ဆုပေးတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မက်လုံးတစ်ခုက အားကစား သမားရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲ သွားစေပါတယ်။ ဆိုလိုတာကဗျာ။ ဆုပေးချင်ရင် ပွဲစမှာပေး။ ဒါမှမဟုတ် ပွဲပြီးမှပေး။ ပေးချင်ရင်မရဘူးလား ခင်ဗျာ။ အခု သူပေးလိုက်တဲ့ မက်လုံးတစ်ခုက အားကစားသမားရဲ့ စိတ်ကို ချက်ချင်း ပျက်စီးသွားစေပြီ မဟုတ်လား။ ခါတိုင်းပွဲတွေမှာ ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်သူက ကိုယ့်ထက် အ သက်ကြီး ခဲ့ရင် ဂါရဝတရားနဲ့ ထိုင်ကန်တော့တတ်တဲ့ လက်ဝှေ့သမားရဲ့ စိတ်ကို အရိုင်းစိတ်ဝင်သွားစေတာပါပဲ။ တစ်သက်လုံး ရိုးသားခဲ့သမျှ မိနစ်ပိုင်းအ တွင်း မှာ ပြောင်း လဲသွားတော့တာပါပဲ။
ဆိုလိုတာက ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်က မကောင်းဘူး မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေရာကျဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ မြန်မာဘောလုံးအသင်းပဲ ကြည့်ပါလား။ ဂိုး သွင်းသူကို ငါးသိန်းဆုချမယ်ဆိုတာနဲ့ ဘောလုံးသမားတွေက ဘယ်သူ့မှ မပေးတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင် ဂိုးသွင်းပြီး ငါးသိန်းရဖို့သာ ကြိုးစားနေကြတော့ ဘာဖြစ်လဲ ရှုံး တာပေါ့။ အခုလည်း ဒီလိုပေါ့။ ပွဲနိုင်တယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှုံးတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပါပဲ။ နောက်ပြီး လက်ဝှေ့ပွဲတွေမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ခြားနားစွာ ကြိုးဝိုင်းဒိုင်က ဘာသြဇာမှမရှိဘဲ လက်ဝှေ့သမားတွေကို အတင်းထိုးပဲ ထိုးခိုင်းနေတာပါပဲ။ မလုပ်ရဘူးလေဗျာ။ ပထမတန်း လက်ဝှေ့သမားတွေရဲ့ အင်အားဟာ သေတတ်တဲ့ ကိစ္စတွေ။
မကြာသေးခင်မှာပဲ ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ သတင်းဖော်ပြမှုအတွက် သတင်းထောက်နဲ့ အယ်ဒီတာကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ စိတ် မကောင်းစွာ ကြားရပါတယ်။ ရတဲ့လခက သိန်းဂဏန်းမပြည့်၊ ဆောင်းပါးရေးခ ထောင်ဂဏန်းလောက် ကလေးရပြီး အဲဒီဆောင်းပါးရဲ့ရလဒ် က ဆယ်နှစ်ဆိုတော့ ”တန်ရဲ့ လား” ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ဖြစ်မိပါတယ်။ အခု ပြစ်ဒဏ်က ပြစ်ဒဏ်တွေထဲက အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်စာရင်းထဲ ပါဝင်နေတာမို့ တုန်လှုပ်ရပါတယ်။ မဟုတ်တာတွေ လုပ်၊ မဟုတ် တာတွေ ပြောပြီး ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် တနင့်တပိုးပါပဲ။
ဒီလိုသာ ပြစ်ဒဏ်တွေ ဆက်တိုက် ကျခံရရင် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက် ရေးမှာ အဓိကပါဝင်နေတဲ့စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဆိုတာ အရင်ဆုံး ပြိုလဲသွားမှာပါပဲ။ တချို့ကလည်း ဒီ လိုဖြ စ်နေရင် ဒီမှာ မရေးတော့ဘူး။ နိုင်ငံတကာပဲ ပို့တော့မယ်လို့ ဆိုသူလည်း ဆိုနေကြပါပြီ။ နိုင်ငံတကာပို့တာက ပိုလုံခြုံတယ်ဆိုတဲ့သဘော ဖြစ်မနေဘူးလားခင်ဗျာ။ ဘယ် လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြစ်ရှိရင်တောင် မျှတတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုဆိုပြန်တော့လည်း အယောင်ဆောင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်တဲ့ လူကြီး ဘယ် လို ပြစ် ဒဏ်မျိုးကျမယ်ဆိုတာ သိချင်ပြန်တယ်။
အခုတလော ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် ကြားနေရတာကတော့ မြန်မာအိမ်ဖော်ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အိမ်ဖော်တင်ပို့မှု အများဆုံးနိုင်ငံဆိုတာ ကလည်း နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေ အနေကို ဖော်ပြနေတော့တာပါပဲ။ တချို့နိုင်ငံရဲ့ ဈေးတွေအရှေ့မှာတောင် အိမ်ဖော်တွေဟာ ကလေးထိန်းပြခြင်း၊ အိမ်ရှင်းလင်းခြင်းများကို သရုပ်ပြလုပ်ပြီး ကြိုက်တာ ရွေးယူကြပါဆိုတဲ့ ဈေးခေါ်စနစ်နဲ့ အိမ်ဖော်ကို ရောင်းချနေပါသတဲ့။
အမှန် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒါဟာ ကျွန်စနစ်ကို ပိုမိုထိရောက်ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲ။ အဲဒီကျွန်တွေက ဘယ်ကသွားကြတာလဲ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီလိုနိုင်ငံက ဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးပါလဲ။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ပြဿနာပေါင်းစုံမို့ လုပ်စားလို့မရ။ ပြည်ပ ထွက်သွားတော့လည်း ကျွန်တွေလို သဘောထားခံရမို့ ပြောပြစရာတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းထုတ်စရာပဲ ရှိပါတော့တယ်။
7/21/2014 09:21:00 AM articles
7/20/2014 11:14:00 AM articles
7/19/2014 03:00:00 PM articles
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူအပြီး သိလိုက်ရသည်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် လူဦးရေ ရှစ်သန်းရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေ၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု ဖြစ်သည်။ ထိုနေထိုင်သူများသည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမျိုးစုံဖြင့် စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းလျက်ရှိရာ လုပ်ငန်းရှင်၊ အစိုးရ အမှုထမ်း၊ စာရေးစာချီ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ စတိုးဆိုင် ပိုင်ရှင်၊ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်၊ စားပွဲထိုး၊ လမ်းဘေးဈေးသည်၊ ကြုံရာကျပန်း အလုပ်သမား၊ ဆိုက်ကားနှင့် အငှားယာဉ်မောင်း စသဖြင့် မျိုးမည်စုံလှသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
ထိုအထဲတွင် လူတကာ နှာခေါင်းရှုံ့ သော်လည်း ထိုနှာခေါင်းရှုံ့သူများလည်း မကင်းလွတ်သော ပျော်တော်ဆက်မယ်များကလည်း ရန်ကုန်တွင် တစ်နေ့တစ်ခြား ပေါများလာသည်။ တိုက်ရိုက်(CSW)နှင့် သွယ်ဝိုက်လုပ်ကိုင်နေသူ (ICSW) ပျော်တော်ဆက်မယ် အရေအတွက်မှာ လူဦးရေ တစ်သိန်းခန့်အထိ ရှိနေပြီဟု လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုထံမှ သိရသည်။ ထိုနှုန်းအရ ရန်ကုန်တွင် လူ၈၀ရှိတိုင်း တစ်ဦးမှာ ပျော်တော်ဆက်မယ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် သဘောဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းအတွက် လူအရင်းအမြစ်ပေးသည့် နိုင်ငံဟုပင် ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ HIV ရောဂါကူးစက်နှုန်းမှာ အာရှတွင် တတိယဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနောက်တွင် တည်ရှိကာ ပျော်တော်ဆက်မယ် အားလုံး၏ ၃၂ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသူများဟု ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပျော်တော်ဆက်မယ် လုပ်သူများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရောဂါ ရှိမရှိ စစ်ဆေးခံထားကြသူများ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ် ကောက်ယူထားသော စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် HIV ဆေးသောက်သုံးရန် လိုအပ်သူ နှစ်သိန်းလေးသောင်းကျော် ရှိသော်လည်း လူရှစ်သောင်းကိုသာ ဆေးပေးနိုင်သေးသည်ဟု သိရသည်။ အစိုးရနှင့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ကောက်ယူထားသော စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်လုပ်သူ Commercial Sex Workers (CSW)မှာ ခြောက်သောင်းကျော်ရှိပြီး Indirect Commercial Sex Workers (ICSW)မှာ ထို့ထက် အဆများစွာ ရှိနိုင်သည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ စာရင်းမှာလည်း အမှန်စာရင်းထက် များစွာလျော့နည်းနိုင်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပြည့်တန်ဆာ စာရင်း ကောက်ရသည်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ရသကဲ့သို့ မဟုတ်သောကြောင့်ဟု အဆိုပါ စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ပါဝင်သော ဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုပျော်တော်ဆက်မယ်များတွင်လည်း လမ်းဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ဈေးဖြတ် ရောင်းသူများမှသည် တယ်လီဖုန်းဆက်ခေါ်က ကိုယ်ပိုင် ကားမောင်းပြီးလာသော တစ်ကိုယ်တော် ပျော်တော်ဆက်မယ်များ အထိ အတန်းတန်း အစားစား ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုပျော်တော်ဆက်မယ်လေးများကို တွေ့ဆုံ အင်တာဗျူးခဲ့ရာတွင် (၁)မိသားစု စားဝတ်နေရေးကြောင့် မိဘကိုယ်တိုင်က သိလျက်ဖြင့် ထိုအလုပ်လုပ်ရန် ခိုင်းစေခံရသူ (၂) ကာရာအိုကေ၊ အနှိပ်ခန်းနှင့် စင်တင်ဂီတ ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် လုပ်ရာမှ ဖြစ်စေ၊ ဆိုင်ရှင်၏ ငွေကြေးရှာဖွေရန် သတ်မှတ်ချက် အရဖြစ်စေ ပျော်တော်ဆက်မယ် ဘ၀ ရောက်သွားသူ (၃) ရည်းစားက လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီး ပစ်သွားချိန်တွင် မထူးဇာတ်ခင်းသူ (၄) မသိနားမလည်ဘဲ လူကုန်ကူးခံရပြီး ငြင်းဆန်ခွင့် မရှိဖြစ်ကာ ပျော်တော်ဆက်မယ် ဘ၀ ရောက်သွားသူ (၅) စားဝတ်နေရေး အတွက် ဖြစ်စေ၊ ပညာရေး အတွက် ဖြစ်စေ ရန်ကုန် တက်လာပြီး ရသည့်အလုပ်ဖြင့် အဆင်မပြေသောကြောင့် လူမသိသူမသိ ပျော်တော်ဆက် အလုပ်လုပ်သူ (၆) ငွေကြေး ချမ်းသာသူများ၏ စပွန်ဆာကို ရယူပြီး တစ်ဦးတည်း အတွက်သာ ပျော်တော်ဆက်သူ (၇) ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့် အိမ်ထောင်ပျက်ပြီး ပျော်တော်ဆက်မယ်ဘ၀ ရောက်လာသူ (၈) လိင်ဆက်ဆံဖက် တစ်ဦးတည်းဖြင့် မတင်းတိမ်သဖြင့် လိင်ဆက်ဆံဖက် များများထားရာမှ ပျော်တော်ဆက်မယ် ဘ၀ ကူးပြောင်းလိုက်သူဟု ရှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
အချို့မှာ လုပ်ငန်း သဘော သဘာဝအရ ပျော်တော်ဆက်မယ် ဘ၀သို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မသိပဲ ရောက်သွားသူများရှိသည်။ ဥပမာ စင်တင်ဂီတ စားသောက်ဆိုင်တွင် အဆိုတော်လေးများ၏ လစာမှာ ကျပ်လေးသောင်းခန့်သာ ဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်က ဧည့်သည်ရရန်၊ ပန်းကုံး မည်မျှရရန် သတ်မှတ်ပြီး ထိုသတ်မှတ်ချက် မပြည့်ပါက တစ်လအကြာ အလုပ်ဖြုတ်မည်ဆိုသောအခါ တွေ့သည့် ဧည့်သည်ကို မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ် ထိုးကျွေးပြီး အလုပ်မပြုတ်ရန် ဆွဲဆောင်ရင်း ဧည့်သည် တဖြည်းဖြည်းများလာကာ သူမ ကိုယ်တိုင် ပျော်တော်ဆက်မယ် ဘ၀သို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားတော့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အဆိုပါ စင်တင်ဂီတမယ် အများစုသည် အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါသည် ဘ၀ဖြင့် ဇာတ်သိမ်းရလေ့ရှိသည်။ စင်တင်ဂီတ လောကတွင် တစ်ကြိမ်တည်း ပန်းကုံး ၁၄၅သိန်းဖိုးရသော အဆိုတော်မလေးများ အထိပင် ရှိခဲ့သည်။ ထိုရသော ပန်းကုံးမှာ ဆိုင်ရှင်တစ်ဝက်၊ ကာယကံရှင် တစ်ဝက် ခွဲဝေယူသဖြင့် အဆိုပါ အဆိုတော်များကို ဆိုင်ရှင်များက အထူး အခွင့်အရေး ပေးလေ့ရှိသည်။ ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်းပေါ်မှ စင်တင်စားသောက်ဆိုင်ဆိုလျှင် အသက် ၁၇နှစ်၊ ၁၈ အရွယ် အဆိုတော်လေးများ မွေးမြူပြီး ပန်းကုံးရှာလေ့ရှိသည်။ ဆိုင်၏ အစားအသောက် ရောင်းရငွေနှင့် တစ်ညတာ ပန်းကုံးရကြေး ယှဉ်လျှင် ပန်းကုံးကြေးက ပိုများကြောင်းလည်း သိရသည်။
အသက်အရွယ်အားဖြင့် ပျော်တော်ဆက်မယ်လေးများသည် အငယ်ဆုံး ၁၄နှစ်မှ အကြီးဆုံး အသက် ၄၀ကျော် အထိရှိသည်။ အဆက်အသွယ် မရှိသော ပျော်တော်ဆက်မယ်များ အနေဖြင့် လမ်းမကြီးများပေါ်တွင် ရပ်ပြီး ဖောက်သည်ရှာရလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကိုးမိုင်မှသည် လှည်းတန်း ယခင် မာလာဆောင်(ယခု အမျိုးသား အင်္ဂလိပ်စာဌာန)ရှေ့အထိ နေ့လယ်ပိုင်းမှ ညပိုင်းအထိ ဖောက်သည်ရှာနေသော ပျော်တော်ဆက်မယ်လေးများကို နေ့စဉ် မြင်တွေ့ရသည်။ ယခုအခါ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ရှေ့ ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ပါ တွေ့လာရပြီ ဖြစ်သည်။ အလားတူ နေစောင်းသည်နှင့် ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်းတွင် အလျှိုအလျှို ထွက်လာသော ပျော်တော်ဆက်မယ်များနှင့် လိင်တူရှာသော ဂေးများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ မြို့ထဲတွင်လည်း ပန်းဆိုးတန်း တစ်ဝိုက်နှင့် လမ်း၄၀ ကားမှတ်တိုင်များတွင် တွေ့ရသည်။ ဝေဇယန္တာ လမ်းမကြီးပေါ် တစ်လျှောက်လည်း နေ့စဉ်နံနက် ၁၀မှ ညနေစောင်းအထိ ပျော်တော်ဆက်မယ်များကို လမ်းပေါ်တွင် တွေ့နိုင်သည်။ သူတို့၏ကြေးမှာ တစ်ညတာ ပျော်ပါးခ ကျပ်သုံးသောင်းမှ ငါးသောင်းအထိဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်သာ ပျော်ပါးမည် ဆိုပါက ကျပ်ငါးထောင်မှ ကျပ်တစ်သောင်းကြား ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ တယ်လီဖုန်းဆက်ခေါ်မှလာသော ပျော်တော်ဆက်မယ်လေးများလည်း တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ ရှိသေးသည်။ ထိုသူများ၏ ကြေးများမှာ တစ်ကြိမ် ပျော်ပါးလျှင် ကျပ်ငါးသောင်းမှ ကျပ်လေးသိန်းအထိ ရှိတတ်သည်။ ခေါ်သည့်နေရာသို့ မိန်းမထိန်းလုပ်သူက ကားဖြင့်လာပို့ပြီး အပြန်တွင်လည်း ကားဖြင့် လာကြိုလေ့ရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပျော်တော်ဆက်မယ် အများစုသည် တယ်လီဖုန်းဖြင့် အဆက်အသွယ် လုပ်ပြီးမှ ဖောက်သည်ရှိရာ နေရာသို့ လာလေ့ရှိသည်။
Yangonunderground.blogspot.comတွင် ရန်ကုန်ရှိ ကလပ်နှင့် ဘား၁၀ခု အမည်နှင့် လိပ်စာများ သာမက တစ်ခုချင်းစီတွင် ရနိုင်သော ပျော်တော်ဆက် မိန်းကလေးများ ဈေးနှုန်းကိုပါ တင်ပေးထားသည်ကို တွေ့ရသလို အနှိပ်ခန်းနှင့် ကာရာအိုကေခန်းများမှ ပျော်တော်ဆက်လေးများ၏ ဈေးနှုန်းများပါ ရေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ယခင်က အနုပညာ လောကသားထဲမှလည်း ထိုသို့လုပ်ကိုင်သူ စုန်းပြုး အနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုအခါ ပျော်တော်ဆက်မယ်လေးများက အနုပညာလောက အတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး သူတို့ ကိုယ်သူတို့ မော်ဒယ် အမည်တပ်ကာ လုပ်စားလာကြသည်။ သူတို့ကို ထိန်းထားသူများမှာ အလှဖန်တီးရှင်များ ဖြစ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံကြေးမှာလည်း ကျပ်နှစ်သိန်းနှင့်အထက် ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် သူဌေးကြီး များ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက နိုင်ငံခြားမှလာသော ဧည့်သည်များကို ဖျော်ဖြေရန် ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ထိပ်သီး မိန်းမထိန်း သုံးဦးရှိသည်။ နှစ်ဦးမှာ အမျိုးသားများ ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးမှာ အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ ထိုသူများထံမှ ခေါ်ပါက အနိမ့်ဆုံး တစ်ညတာ ပျော်တော်ဆက်ခ ကျပ်၁၀သိန်းမှ ကျပ်သိန်း၅၀ကြားရှိပြီး ပျော်တော်ဆက်နှင့် မိန်းမထိန်းတို့ တစ်ဝက်စီ ခွဲဝေယူ ကြသည်ဟု သိရသည်။
အချို့သော မော်ဒယ် အေဂျင်စီများကလည်း ပျော်တော်ဆက် အလုပ်ကို တရားဝင်သဖွယ် လုပ်ကိုင် နေကြသည်။ အေဂျင်စီမှ မော်ဒယ် အသစ်လေးများ( အထူးသဖြင့် သင်တန်းသူလေးများ)ကို သူဌေးများထံ ထည့်ပေးလေ့ရှိပြီး ထိုသို့ မငြင်းမဆန် လက်ခံသူကိုသာ ပွဲများတွင် ထည့်သုံးပေးလေ့ ရှိသည်။ အကွက်မြင်လာသော မော်ဒယ်အချို့ကလည်း စိတ်တူကိုယ်တူ စုပြီး ကိုယ်တိုင် ပျော်တော်ဆက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လာကြသည်။ ထိုမော်ဒယ်များသည် စနေနှင့် တနင်္ဂနွေဆိုလျှင် အစိုးရ အရာရှိကြီးများကို ဖျော်ဖြေရန် ငွေကြေး အကုန်အကျခံမည့် သူဌေးများ နှင့်အတူ နေပြည်တော်သို့ တက်လေ့ရှိသည်။
အလားတူ ဆိုရှယ် မီဒီယာများ ဖြစ်သည့် ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့် ဂျီတော့များတွင် မိမိကိုယ်ကို ကြေညာ ရောင်းချနေသော အမျိုးသမီး များစွာရှိသည်။ တစ်ဦးဆိုလျှင် ၂နာရီ ကျပ်ငါးသောင်းဟု သူ၏ဈေးနှုန်းကို ဗြောင်ရေးထားသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိသော ပြည့်တန်ဆာ ဆိုသည်မှာ အဆက်အသွယ် မရှိသူ၊ အဆက်အသွယ် မကောင်းသူ၊ တစ်ကိုယ်တော် ပျော်တော်ဆက် လုပ်သူများနှင့် အနှိပ်ခန်း အမည်ခံ ပျော်တော်ဆက် လုပ်ငန်းလုပ်သူများသာ အဖမ်းခံရလေ့ရှိပြီး မျက်နှာကြီး ပျော်တော်ဆက်များမှာ မည်သူ၏ ရန်ရှာမှုမှ မခံရဘဲ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးစနစ် အပြောင်းအလဲတွင် ပျော်တော်ဆက် လုပ်ငန်း တစ်ရှိန်ထိုး ကြီးထွားလာသည်မှာ မငြင်းနိုင်သော ကိစ္စဖြစ်သည်။ ပျော်တော်ဆက် လုပ်ငန်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်သော လိင်ဆက်ဆံမှု မှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများကို မည်သို့ ထိန်းချုပ်မည်။ ထိုပျော်တော်ဆက်မယ်လေးများကို မည်သို့ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးမည် ဆိုသည်မှာ အရေးကြီး လှသည်။
မြောက်ဒဂုံမှ အသက် ၁၅နှစ်အရွယ် ပျော်တော်ဆက်မယ်လေး တစ်ဦးက “အိမ်ပေါင်တာကို ရွေးရတော့မယ့် အချိန်မှာ အစ်မက ရည်းစားနဲ့ နေဖူးတော့ ပါကင်ဖွင့်တဲ့ အလုပ် လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒီတော့ အမေက သမီးကို ဒီတစ်ခါတော့ အိမ်အတွက် လုပ်ပေးပါလို့ ပြောတယ်။ တစ်ကြိမ်လုပ်ပေးပြီး ပေမယ့် အမေက ထပ်ထပ်ခိုင်းနေလို့ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ တစ်လကို သုံးခါလောက် ဒီအလုပ်လုပ် ရတယ်။ အခုတော့ အစ်မကလည်း သမီးနဲ့တွဲပြီး ဒီအလုပ်လုပ်နေတယ်”ဟု ပြောပြသည်။ ပျော်တော်ဆက်မယ် လုပ်နေသူ အနုပညာ လောကမှ တစ်ဦးက “သမီးက နယ်ကတက်လာတာ။ ကိုယ့်ရုပ်ရည်နဲ့ဆို အနုပညာ လောကမှာ အောင်မြင်မယ်ထင်လို့။ ဒါပေမဲ့ အိမ်က ပေးတဲ့ငွေနဲ့ ဒီမှာနေထိုင် စားသောက် စရိတ်က မလွယ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်က အနုပညာ လောကကို ၀င်တာဆိုတော့ အ၀တ်အစားက အရမ်းဝယ်ရတယ်။ သမီးရဲ့ မိတ်ကပ် ဆရာက နင်ဒီအတိုင်းဆို ဘာမှဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဒီအလုပ်ကို သူက ဆက်သွယ်ပေးတာ။ သူက ၁၅သိန်းတောင်းပြီး သူတစ်ဝက် သမီးတစ်ဝက် ယူကြတယ်။ တခါတလေတော့ သူဌေးတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားအထိ လိုက်ရတယ်။ သူဌေး တစ်ယောက်ဆို မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်ကို နိုင်ငံခြားသွားတိုင်း ခေါ်သွားတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ လောင်းကစား လုပ်တိုင်း အဲဒီ့မင်းသမီးပါရင် နိုင်တယ်လို့ သူဌေးက အယူရှိလို့ခေါ်တာ။ ပျော်တော်ဆက်ဖို့က အဓိက မဟုတ်ဘူး”ဟု ပြောပြသည်။ အလှ ဖန်တီးရှင် တစ်ဦးကမူ “သူတို့ အတွက် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေအောင် ဖောက်သည်ရှာပေးတ ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က တစ်ခါပဲ စားရတာ။ သူတို့ချင်း ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွေ့ကြတာမှာ ကိုယ်တွေက ဘာမှရတော့တာ မဟုတ်ဘူး။ သိတောင် မသိရတော့ဘူး။ ကိုယ်က ပိုက်ဆံလိုချင်ရင် နောက်ထပ် ဖောက်သည် အသစ် ထပ်ရှာ ပေးရတာ။ ဖုန်းထဲမှာ သူတို့ပုံတွေနဲ့ နာမည်တွေ ထည့်ထားပြီး စိတ်ချရတဲ့သူဆိုရင် Viberကတစ်ဆင့် ပို့ပေးရတယ်။ ဟိုကကြိုက်တာရွေးပြီး ပြန်ပို့ရင် သူတို့ခေါ်တဲ့ နေရာ လိုက်ပို့ပေးရတာ။ ကိုယ်တွေဆီမှာတော့ အနုပညာလောကထဲ ၀င်ကာစလေးတွေ များပါတယ်။ အမှန်က ဒါလေးတွေက ပစ္စည်းသန့်တာ၊ နာမည်ကြီးချိန်ဆိုရင် ဗတ်လပိုင် လိုက်နေပြီ”ဟု သူ၏ အတွေ့အကြုံနှင့် သူ၏အလုပ်ကို ပြောပြသည်။
ပျော်တော်ဆက် လုပ်ငန်းသည် မည်သည့်နိုင်ငံမှ မကင်းသော လုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်း ရေရှည်တွင် အမျိုးသား ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေရန် အတွက် ယခုထက် ပွင့်လင်း မြင်သာသည့် အစီအမံများကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်သင့်ပြီ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပျော်တော်ဆက်မယ်များကို ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ပေးရန် အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဆရာဝန် တစ်ဦးက ဘယ်လောက်တောင် ကျန်းမာရေး အသိပညာ နည်းသလဲဆိုရင် အကာအကွယ် မသုံးဘဲ လိင်ဆက်ဆံရင် အေအိုင်ဒီအက်စ် အပါအ၀င် ရောဂါတွေရမယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး။ တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြောက်စရာပေါ့။ ပျော်တော်ဆက် လုပ်ငန်းတွေ တရှိန်ထိုး ကြီးထွားလာချိန်မှာ အစိုးရကလည်း အာဏာရှင် အစိုးရဆိုတော့ ကွန်ဒုံးကြေညာတာ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပေးတာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆောင်ရွက်ခွင့် မပြုခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်တွေ များလာတာလည်း ဖြစ်တယ်”ဟု သူ၏အမြင်ကို ပြောပြခဲ့သည်။ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးက “ဘယ်သူမှ မွေးကတည်းက ပျော်တော်ဆက်မယ် လုပ်စားမယ်ဆိုတဲ့ ဘ၀ရည်မှန်းချက် ထားခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီအလုပ်ကို သူတို့ လုပ်ရတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအလုပ် လုပ်ပြီးမှလည်း တခြားအလုပ်ကို သူတို့ ပြောင်းမလုပ်ချင်ကြတော့ဘူး။ သွေးသား ဆန္ဒကို ဖြေဖျောက်နိုင်ရင်း တစ်ချိန်တည်းမှာ ဒီအတွက် ငွေက ရနေတာကိုး။ ဒီတော့ သူတို့ကို လိင်ဆက်ဆံရာက တစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ၊ STD အကြောင်းသိအောင် ပညာပေးဖို့လိုတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီပျော်တော်ဆက်မယ် ဘ၀ မရောက်ခင် ရအောင် တားနိုင်ရင်တား၊ မတားနိုင်ရင်တော့ သေတဲ့အထိ ဒီအထဲက ပြန်မထွက်နိုင်တော့ဘူး”ဟု သူ၏ အမြင်ကို ပြောပြ သွားခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေးစနစ် တိုးတက်ပြီး လူတိုင်း လက်ကိုင်ဖုန်း ကိုင်နိုင်သည့်အချိန်၊ စီးပွားရေးအတွက် ယခင်ကထက် ငွေရှာရန် ပိုမိုလိုအပ်လာချိန်၊ ပြည်တွင်းသို့ နိုင်ငံခြားသားများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာချိန်၊ နည်းပညာကြောင့် အသစ်အဆန်းများ အချိန်နှင့်အမျှ ပေါ်လာချိန်တွင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပျော်တော်ဆက်မယ် ဘ၀ ရောက်သူ များစွာရှိနေလေရာ ထိုသူများကို ဖမ်းဆီးရန်ထက် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးရန်က နိုင်ငံအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရသည်။
7/19/2014 11:00:00 AM articles
7/18/2014 07:10:00 AM articles
ရန်ကုန်မိုးက သဲကြီးမဲကြီး ရွာချလိုက်သည်။ အိမ်ပေါက်ဝမှလမ်းထိပ်ဘက်ကို မျှော်ကြည့်မိပြန်တော့ လမ်းပေါ်မှလူအများသည် ဒူးလောက်ထိရှိသောမိုးရေများထဲမှာ ပုဆိုးကိုမကာ၊ လုံချည်ကိုမကာ သွားလာနေကြသည်။ ဒီ လောက်များတဲ့မိုးရေတွေနဲ့သွား ဖို့မဖြစ်သေးပါဘူး။ မိုးထဲရေထဲ ကူးရင်း၊ သန်းရင်း တော်တော် ကြာ လျှပ်စစ်မီးကြိုးတွေပြုတ်ကျ နေရင် ခက်ရချည်ရဲ့ဟု တွေးမိ ပြန်သည်။ တွေးရင်း၊ တွေးရင်း စိုးရိမ်စိတ်တွေကပိုတိုးလျက်ဝင် လာသည်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာ ယခုတစ်လော လျှပ်စစ်မီးကြိုးတွေမကြာခဏ ပြုတ်ကျသဖြင့် ဓာတ်လိုက်ပြီးသေဆုံးရသူတွေ မနည်း လှတော့ပြီမဟုတ်ပါလား။ မနည်း လှတော့ဆို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ မေ၊ ဇွန်နှစ်လတာမိုးရာသီကာလ အတွင်း ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာပင် လူ ခြောက်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီ။ တစ်နိုင်ငံ လုံးအတိုင်းအတာနှင့်ဆိုပါလျှင် လူပေါင်းနှစ်ဆယ်မျှ ဓာတ်လိုက် သေခဲ့ပြီဟု သတင်းမီဒီယာများက ဆိုပါပြီကော။
ဟော . . . ယခုစာရေးနေရင်း ပင် သတင်းစာကိုကောက်ကိုင်မိ ရာ ပြည်မြို့မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကြိုးပြုတ်ကျ၍ နွားနှစ်ကောင် ဓာတ်လိုက်ကာ သေပြန်ပြီဆို သောသတင်း သတင်းစာမှာပါ လာသည်။ ကြောက်စရာကောင်း လှပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ် အ နည်းငယ်က ရန်ကုန်မြို့၊ စမ်း ချောင်းမြို့နယ် လင်းလွန်းတောင် ရပ်ကွက်ရှိ ကျွန်မတို့လမ်း၊ ကျွန်မ တို့အိမ်နှင့်မျက်စောင်းထိုးအိမ်မှ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်လူငယ် လေးတစ်ယောက်လည်း ကိုယ့် မျက်စိရှေ့မှာပင် မိုးကာလ၊မိုးသည်းသည်းမှာ ပြုတ်ကျနေသော လျှပ် စစ်ဝိုင်ယာကြိုးကြောင့် ဓာတ် လိုက်၍သေဆုံးခဲ့ရဖူးပြီ။ ထိုစဉ် က မည်သူမှလည်းမဆွဲရဲ။ မိုးသည်းထဲမှာ ထိုလူငယ်လေးခမျာ ကယ် တင်သူမရှိဘဲ သေခဲ့ရသည်။ မိုး ရေများထဲမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားက စီးဝင်နေသည်ဖြစ်၍ မည်သူကကောကယ်တင်ရဲပါမည်နည်း။ သတ်သွားသည်က လျှပ်စစ်ဓာတ်၊လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလေ။ ဗို့အား ၂၂၀ ရှိသည်။ သေပြီဟေ့ဆို တုံးခနဲ။ ဘုံးခနဲ။
ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်လာလျှင်လည်း ကြောက်ရသည်။ လျှပ်စစ်မီးလာ ချိန်မှာ မီးကြိုးပြတ်ကျလျှင်ဓာတ် အားတွေစီးဝင်နေဆဲဖြစ်၍ ဓာတ်လိုက်ပြီးသေနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်မီးမလာလိုက်၊ လာလိုက်ဖြစ်နေစဉ်ကလည်း ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်မှာပင် လူတစ်ယောက်ဓာတ်လိုက်ကာသေဆုံးဖူးသည်။ လျှပ်စစ်မီးမှာ မလာတစ်ချက်၊ လာတစ်ချက်ဖြစ်၍ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းပြုပြင်လုပ်ကိုင်စားသူတစ်ဦးကမီးပျက်သွားစဉ် မီးကတော်တော်နှင့်လာဦးမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုထင် မြင်ကာ လျှပ်စစ်မီးခလုပ်ကိုမပိတ်မိဘဲ လျှပ်စစ်မီးဖိုကိုပြင်သည်။ ဖျတ်ခနဲမီးပြန်လာချိန် ဓာတ်လိုက်ပါတော့သည်။ တကယ်တော့ မီးက တစ် မိနစ်တာအချိန်မျှသာ ပြန်လာခဲ့သည်။ ထိုတစ်မိနစ်ကပင် လူ တစ်ယောက်၏ဘဝကို ဇီဝိန်ချုပ် စေခဲ့သည်။
ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်မှာ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ပညာပေးမှုလည်းမရှိ။ ကျေးလက်မှာလျှပ်စစ်ဆိုတာကို ကြားဖူးရုံ သာကြားဖူးပြီး အန္တရာယ်ကိုပြည် သူအများသိရှိစေရန် ပညာပေးမှု မရှိ၍ ပေါက်ပြဲနေသောသာမန် မီးစက်ဓာတ်ကြိုးကို တက်နင်းမိ၍ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသူတွေလည်း ရှိဖူးသည်။ ဒီကနေ့မှာပင် မွန်ပြည် နယ်၊ ကျိုက်ထီးဆောင်းစေတီ ရင်ပြင်တွင် ဝိုင်ယာကြိုးပေါက်နှင့် ထိနေသော သံပန်းကိုထိမိရာမှ ဓာတ်လိုက်ပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရ သည်ဟု ကြားသိရပြန်သည်။ စိတ်ထိခိုက်စရာတွေပါ။
ယခု လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြိုး တွေပြုတ်ကျ၊ ပြတ်ကျသဖြင့် ပြည်သူ့အသက်တွေ ချက်ချင်း လက်ငင်းဆိုသလို ဘုံးခနဲ၊ ဘိုင်း ခနဲ သေဆုံးနေကြရခြင်းများ အတွက် မည်သူ့မှာတာဝန်ရှိ သနည်း။ တာဝန်အရှိဆုံးကကော မည်သူနည်း။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ တော့ လျှပ်စစ်မီးပျက်လျှင်လည်း လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်ကြောင့် လုပ် ငန်းထိခိုက်နစ်နာလျှင် လျော် ကြေးရရှိရန် တရားစွဲတောင်းဆို နိုင်သည်။ ဓာတ်အားလိုင်းများ ကြောင့် အသက်သေဆုံးလျှင် တော့ လျော်ကြေးပေးရမည်။ အသက်အာမခံ စနစ်လည်းရှိ သည်။ ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်မှ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှာမူ အခွန် ကောက်လျှင် မြန်သလောက်ထိ ခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် တာဝန် ခံမှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေသည်။ လှည်းတန်းဈေးမှာသေဆုံးသွား သူများအတွက် သဂြုင်္ိဟ်စရိတ် ထောက်ပံ့သည်ဟု သိရသည်။ လျော်ကြေးဟုမကြားသိရ။ အမှန် စင်စစ် သင်္ဂြိုဟ်စရိတ်မျှနှင့်မလုံလောက်။ ထိုက်တန်သောလျော် ကြေးလည်းပေးသင့်သလို လျော်ကြေးကို စနစ်တကျပေးသည့် စနစ်လည်းရှိကိုရှိရမည်။ လူတစ်ယောက်သေဆုံးသွား၍ နားလည်မှုနှင့်ကရုဏာကြေးပေးသည့်ငွေမှာ စနစ်တကျဟုမဆိုနိုင်။ အမှန်တကယ်တာဝန်ခံထားသူဝန်ကြီးဆိုသူကိုယ်တိုင်လည်း မိသားစု များကို သွားရောက်ကြည့်ရှု တောင်းပန်သင့်သည်။ ယခုဆို လျှင် နှစ်လတွင်းဆက်တိုက်ဖြစ် နေသောဓာတ်အားကြိုးပြုတ်ကျ ကာ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှုများ အတွက် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးသည် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သတင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ပြည်သူကို တောင်းပန်သင့်သည့် အနေအထားကိုပင် ရောက်ရှိနေပါပြီ။ အမှန်တကယ်သာဆိုလျှင် ကျွန်တော့်ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါဟု တာဝန်ခံကာ တာဝန်မှပင် နုတ်ထွက်သင့်ပြီထင်မိသည်။ နှစ်လအတွင်း လူနှစ်ဆယ်မျှ သေဆုံးခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား။
ပြောလက်စနှင့် ပြောရဦး မည်။ တစ်ခါက အိမ်မှာမီတာသစ် တပ်ဆင်ပေးသော လျှပ်စစ်ဌာန မှဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို (မီးဘာ ကြောင့် မကြာခဏပျက်နေသလဲ၊ ထရန်စဖော်မာတွေဘာကြောင့် မကြာခဏ ပေါက်တတ်သလဲ)ဟုမေးမြန်းဖူးခဲ့သည်။ (ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနမှာ တကယ်တတ် တဲ့၊ တော်တဲ့ ဆရာသမားကြီး တွေမရှိတော့ဘူး။ စစ်တပ်ကလူ တွေရောက်လာလိုက်။ ဌာနကနေရာကောင်းတွေ ဝင်ယူလိုက်။ တော်တဲ့တတ်တဲ့သူတွေဘေးကိုအဝေးကိုလွင့်သွားလိုက်။ ဝန်ကြီးသစ်ဆိုသူက သူ့လူနဲ့သူလာတာလေ။ နောက်လူလာရင် အရင်လူကနေရာပျောက်။ လူသစ်တွေကစမ်းတဝါးဝါး လုပ်ကြရင်း နည်းနည်းလေးကျွမ်းကျင်တော့မယ်လို့ဟန်ပြင်ကာရှိသေးတယ်။ စစ်တပ်က နောက်ထပ်ဝန်ကြီးသစ်ပြောင်းလာတယ်။ နောက်လူသစ်တွေ နေရာကောင်းရ။ အရင် လူတွေချောင်ထိုး။ အရင်လူက နောက်လူကို အမြင်ကတ်ပုဒ်မနဲ့ သူတို့အတွေ့အကြုံတွေကို မသင်ခဲ့။ မပြခဲ့ကြဘူးဗျ။ နောက်တစ်ခုက ပစ္စည်းတော်တော်များများက တရုတ်ပစ္စည်းတွေသုံးတာ များတယ်။ တရုတ်စက်တစ်ရက်စုတ် ဆိုတော့ ပျက်လွယ်တာလည်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဌာနမှာ ဘာပါဝါမှရှိတာမှမဟုတ်တာ။ ကိုယ်သိလည်း မပြောရဲပါဘူးဗျာ)ဟုဆိုခဲ့သည်။
ထိုစကားမျိုးကိုကြားသိရ သည်မှာ တကယ်ပင်စိတ်ပျက် စရာ။ တတ်သူတွေကိုချောင်ထိုး၊ မတတ်သူတွေနေရာရဖို့ ပံ့ပိုး စနစ်ကြီးနှင့် ဓာတ်ကြိုးတွေက ပြုတ်ကာ ပြတ်ကာကျနေလေ သလား။ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီ။ အမှန်စင်စစ် ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေအဖို့မှာ လျှပ်စစ်နှင့်သက်ဆိုင် သောကိစ္စများသည် နားမလည် သောကိစ္စမျှသာဖြစ်သည်။ အထူး သဖြင့်တော့ မြို့ပြလျှပ်စစ်ပေးဝေ ရေးစနစ်အကြောင်းကို လုံးဝမသိ ပါဟုသာပြောရမည်။ အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ကိစ္စကိုပင် သတိထား ကိုင်နေရသူများသာဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့ တကယ်သိသည်ရှိကြ သည်မှာ မီးပျက်လျှင် စိတ်ညစ် စရာ။ မီးပြန်လာလျှင် (ဟေး)ခနဲ အော်ကာ ဝမ်းသာရမည်ကိုသာ သိသည်။ တကယ်တမ်းမြို့ပြလျှပ် စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး ၏ စိတ်ချလုံခြုံအောင် လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ခံရမည့်တာဝန်ခံမှာ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတို့သာဖြစ်သည်။
ယခုတော့ ကျွန်မတို့ပြည်သူ တွေအဖို့ မိုးထဲရေထဲမှာ လမ်း ထွက်ဖို့ခက်နေပြီ။ လမ်းမပေါ် မထွက်လိုက်နှင့်။ လမ်းမများပေါ်မှာ မော်တော်ကားတွေကကျပ်။ ရေဆိုးမြောင်းများက ရေမစီး။ မိုးရွာချလိုက်သည်နှင့် ရေပင် လယ်။ ထိုမိုးရေတွေထဲမှာလျှပ်စစ် မီးကြိုးအဆွေးတွေက တဖြုတ် ဖြုတ်ပြတ်ကျ။ တကယ်တော့လျှပ် စစ်ဝိုင်ယာကြိုးများသာမကပါ။ ဝိုင်ယာကြိုးပေါင်းများစွာဖြင့် ငှက်သိုက်ကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးလှသော ဓာတ်အားတိုင်များလည်း ဆွေး မြည့်နေပါပြီ။ မဆွေးမြည့်သေးပါ ဘူးဆိုသည့်တိုင် အသစ်လဲလှယ်မှ စိတ်ချလုံခြုံမည့်အနေအထား ဖြစ်နေပြီဟုသာထင်မြင်မိသည်။
သြော် . . . ပြောရတာလည်းမောပါသည်။ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်မျှ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲလာသူတွေ မည်သို့မည်ပုံလုပ်ခဲ့ကြသည်မသိ။ ရာထူးကိုယူ၊ ဘဏ္ဍာကိုနှိုက်။ အလှည့်ကျဝေ စား။ တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် လူသစ် လူဟောင်းလဲလှယ်ကာ ဝေစားမျှ စား။ နောက်လာသူက ရှေ့ကလူ ထက်ပိုဈေးကောင်း။ ပိုပြီးကိုယ် ကျိုးရှာ။ တကယ်တမ်းလုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သည့်တာဝန်ပိုင်းကို မသိ။
ထိုပုံစံအတိုင်း တစ်တိုင်း ပြည်လုံးကို နှစ်ပေါင်းငါးဆယ် ကျော်မျှ ခပ်တည်တည်မှိန်း၍ပစ် ပယ်ထားခဲ့ကြသမျှ ယခုအချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွင်းက စာသင် ကျောင်းများလည်းဆွေး၊ ရေနုတ် မြောင်းများလည်းဆွေး၊ ဓာတ် တိုင်လည်းဆွေး၊ ဝိုင်ယာကြိုး လည်းဆွေးနေကြပြီဟုသာပြော ချင်သည်။ ထိုထက်ပိုပြောရလျှင် စစ်တပ်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနေရာ တကာမှာပါလေရာပဲခူးဆားစနစ် ကြီးလည်းဆွေးပြီဟုသာဆိုချင် သည်။ မည်မျှပင် ကျောင်းဆွေး၊ မြောင်းဆွေး၊ ဓာတ်တိုင်ဆွေး ဆွေး၊ ဓာတ်ကြိုးဆွေးဆွေးရှိနေ ပါစေ။ ငါ ငါ ငါတို့အုပ်ချုပ်မှု အာဏာနေရာတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် ပါနေချင်သေးသူတွေရှိနေလေတော့ တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်အရေး ရွှေရင်တကယ်လေးမိပါ သည်။
မပြောတတ်တော့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်၏နေရာတိုင်း၊ ဌာန တိုင်း၊ ကိစ္စတိုင်းမှာ ပျက်ယွင်း ဆွေးမြည့်လေသမျှကိုထောက်ပြ ရလျှင် မြန်မာပြည်သားတစ် ယောက်မှာ ပါးစပ်ဆယ်ပေါက်ပါ လျှင်ပင် ပြော၍မကုန်ဟု ဆိုသူ တွေလည်းရှိနေပြီ။ တိုင်းဆွေး ဆွေး၊ ပြည်ဆွေးဆွေး၊ ခေတ် စနစ်ဆွေးဆွေးအောက်မှာ နေ ထိုင်နေရသော ပြည်သူဆိုတော့ လည်း ကိုယ်မသေချင်လျှင် ကိုယ့် အသက် ကိုယ်စောင့်ရှောက်ပြီး လမ်းထွက်လျှင် တောင်ကြည့်၊ မြောက်ကြည့်။ ဘယ်ကြည့်၊ ညာ ကြည့်။ မော်တော်ကားတိုက်မည့် အရေး ဝေးဝေးကရှောင်။ ပုဆိုး ကိုမ၊ လုံချည် မချနှင့်။ အောက် မှာမြောင်းပေါက်။ လူတစ်ယောက်စာ အသာကလေးကျနိုင်သည်။ ဟောဟိုးနားက မြောင်းဆွေးကြီး က မြောင်းဖုံးမရှိတော့ဘူး။ ကျိုး ပဲ့ကုန်ပြီ။ မြောင်းကျိုးအပေါက်ထဲ ကားခနဲကျရင် ရေစီးနဲ့ပါသွား နိုင်သည်။ အောက်ကိုချည်းလည်း ကြည့်မနေကြနှင့်။ အထက်က ဓာတ်ကြိုး ဖြုတ်ခနဲပြတ်ကျ။ သုံး မိနစ်နဲ့ဘဝပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ သတိထားကွယ်ရို့။
7/17/2014 10:06:00 AM articles
အရင်ခေတ်က စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းပွဲဟာ အခုလို ဆောင်းတွင်းမှာ ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲ မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ် ဒါမှမဟုတ် ဧပြီလ ပထမပတ်ထဲမှာ ဆင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အစဉ်အလာ အရလည်း အရင်ခေတ်က သမ္မတတို့၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့က ကျောင်းဆင်းပွဲမှာ တက်ရောက် ချီးမြှင့်ကြပါတယ်။ အာဏာရှင်ကြီး လက်ထက်မှာတော့ ကျောင်းဆင်းပွဲကို သမီးတော်တွေ၊ မြေးတော်တွေနဲ့ ကြွချီချီးမြှင့်လေ့ရှိတယ်။ ရန်ကုန်ဆိုတာ အဲဒီ့ကာလမှာ အလွန်ပူလေတော့ အပူရှောင်တာလည်း ပါသပေါ့လေ။ အဲဒီမှာပဲ များသောအားဖြင့် သင်္ကြန် ကျလေ့ရှိတယ်။
သင်္ကြန်ဆိုတော့ ရေလောင်းဖို့၊ ရေပက်ခံဖို့ လိုလာပြီ မဟုတ်လား။ ကာချုပ်ကြီး သမီးတော်တွေက ရေပက်ခံ ထွက်လို့လည်းမဖြစ်၊ မတော် ရေပက်သလိုနဲ့ အက်ဆစ်နဲ့ ပက်သွားရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ။ အလှတွေ ပျက်ကုန်မှာပေါ့။ ပြီးတော့ အရပ်ရပ် နေပြည်တော် ကြားလို့မှ မတော်၊ ကာချုပ်သမီး အက်ဆစ်နဲ့ အပက်ခံရခြင်းဆိုပြီး ဂျာနယ်တွေထဲ ပါလာဦးမယ်။ စာပေစိစစ်ရေးက ဖြုတ်လို့ ဂျာနယ်တွေမှာ မပါသည့်တိုင်အောင် အကောက်ဉာဏ် ခလောက်ဆန်နဲ့ သွေးခွဲနေသည်တို့၊ ဂုံးတိုက်နေသည်တို့စတဲ့ တံဆိပ်များရှင် ပြည်ပရောက် မြန်မာမီဒီယာတွေက ဖွလိုက်ရင် ဘယ့်နှယ်လုပ် မလဲ။ ပြည်သူတွေ ၀မ်းသာစရာ ဖြစ်နေဦးမယ်။ အဲဒီထက် ဆိုးတာက ရေပက်တာနဲ့ရောပြီး နာနတ်သီး လို့ခေါ်တဲ့ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံး ပစ်သွင်းသွားရင် ဒုက္ခများကုန်ကြဦးမယ်။ ဒီတော့ သမီးတော်တွေလည်း ရေပက်လို့ရအောင်၊ အန္တရာယ်လည်း ကင်းအောင် အလိုက်တသိ စီစဉ်ပေးဖို့က အထက် တာဝန်ရှိသူတွေ အပေါ် ကျရောက် လာခဲ့ပြီပေါ့။
ဒါကြောင့် ကာချုပ်ကြီး မိသားစုမလာခင် ပြင်ဦးလွင် တပ်နယ်ထဲမှာ အရပ်ရှည်ရှည်၊ အသားဖြူဖြူ၊ အသက်ငယ်ငယ်၊ ရုပ်ချောချော အရာရှိငယ်တွေကို ရွေးထုတ်ရပါတယ်။ သူတို့ကို တပ်မတော် ဧည့်ဂေဟာလို့ခေါ်တဲ့ အိမ်တော်မှာ ကာချုပ်ကြီးရဲ့ မိသားစုကို သင်္ကြန် ကာလ အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ တာဝန်ချထားလိုက်ပါတယ်။ တာဝန်ကတော့ သင်္ကြန်တွင်းမှာ ယူနီဖောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ စမတ်ကျကျ ၀တ်ထားတဲ့ အရပ်ဝတ် အရပ်စားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သမီးတော်တွေ တည်းနေတဲ့ အဆောင် အောက်ကနေ ဖြတ်လျှောက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကြန်လည်း ကျပါပြီ။ ကာချုပ်ကြီး မိသားစုလည်း ပြင်ဦးလွင်မှာ ကျောင်းဆင်းပွဲတွေပြီးလို့ သင်္ကြန်ကာလ အနားယူချိန်လည်း ရောက်နေပါပြီ။ တပ်မတော် ဧည့်ဂေဟာ အပေါ်ထပ်မှာလည်း သမီးတော်တွေက ရေပုံးတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပါပြီ။ ဟော…. အရာရှိငယ်လေး တစ်ယောက် အဆောင်ရှေ့ကနေ စမတ်ကျကျ လမ်းလျှောက် လာနေပါပြီ။ လက်ထဲမှာလည်း ဖိုင်တစ်ထပ်ကြီး ကိုင်လို့၊ ဘယ်သူ့ကို ဘာများ သွားသတင်းပို့မလို့ပါလိမ့်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗွမ်းကနဲ အသံနဲ့အတူ အဲဒီ့ အရာရှိလေး အပေါ်ကို ရေတွေကျလာပါတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ရေလောင်းခံလိုက်ရတဲ့ အရာရှိလေးက လန့်သွားပါတယ်။ ဖိုင်တွေတောင် လက်ထဲက လွတ်ကျလို့ ပြန်ကောက်ရပါတော့တယ်။ လူရော ဖိုင်တွေရော ရွှဲရွှဲစိုကုန်ပါပြီ။ အပေါ်ထပ်မှာတော့ တိုင်ကွယ်ပြီး တခစ်ခစ်ရယ်နေတဲ့ သမီးတော်တွေ ရှိပေမယ့် အဲဒီအရာရှိလေးမှာ မော်ဖူးစေ အမိန့်မရထားတဲ့အတွက် အပေါ်ကို မော့မကြည့်ဝံ့ပါဘူး။ ဒါပေသိ ဘေးဘယ်ညာကိုကြည့်ရင်း သူ့ကို ဘယ်နေရာက ဘယ်သူတွေ ပက်လိုက်ပါလိမ့်လို့ ခေါင်းကုတ်ရင်း ရေတွေကို လက်နဲ့အသာခါချလို့ ဆက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။
ရုပ်ရှင်သာ ဆိုရင်တော့ အကယ်ဒမီရမယ့် အခန်းပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုနဲ့ သင်္ကြန်ကာလမှာ တပ်မတော် ဧည့်ဂေဟာ ရှေ့ကနေ အရာရှိလေးတွေ ဖြတ်သွားလိုက်၊ အပေါ်က ရေတွေလောင်းချလိုက်၊ ရေလောင်းခံရတဲ့ အရာရှိလေးတွေ လန့်သွားလိုက်နဲ့ သင်္ကြန်ကာလကို ကာချုပ်ကြီးရဲ့ သမီးတော်တွေက ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းကြပါတော့တယ်။ သူတို့က အဆောင်အပေါ်ကနေ ရေတွေ ပက်လိုက်၊ အောက်က အရာရှိလေးတွေက သူတို့ကို ဘယ်သူပက်မှန်း မသိရှာဘူးဆိုပြီး သဘောတွေ ကျလိုက်နဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အရာရှိလေးတွေရဲ့ ညနေခင်း အရက်ဝိုင်းမှာတော့ “မင်းကလည်း အိုဗာအိုက်တင် လုပ်လိုက်တာ၊ လန့်ပြရင် တော်ရောပေါ့။ အောင်မယ်လေးဗျဆိုပြီး ထခုန် ပြနေသေးတယ်တို့၊ ဟဒီလိုမလုပ်ရင် သူတို့ အပေါ်ကနေ ရေပက်မှာကို ကြိုသိနေလို့ မကြောက်တာပါ။ မလန့်တာပါဆိုရင် အမှုက ပိုကြီးဦးမယ်။ ခုတော့ ပြီးကရော၊ သူတို့လည်း သဘောကျ တိုင်ကြားက ချောင်းကြည့်နေတဲ့ တပ်နယ်မှူးကြီးက ငါ့ကို လက်မထောင်ပြပြီး ချီးကျူး သွားသေးတယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ၊ ဟေ့ကောင် ငါ့ဖိုင် ရေစိုသွားပြီနော်။ အသစ်ပြန်ဝယ်ပေးဦးဆိုတဲ့ အသံတွေ၊ တော်ရုံပဲ အိုက်တင်ပေးကြဦး ဟ၊ မတော်လို့ တော်ကောက်ပြီး ပန်းခွေစွပ်သွားရင် ငါတို့ရဲ့ လက်ရှိရည်းစားတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ သတ်သေသွားဦးမယ်တို့” စတဲ့ အသံတွေ ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ဆီကနေ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် သာဂေါင်ကြီးက အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်က အစိုးရ ကက်ဘိနက်မှာ သာဂေါင်ကြီးဟာ တိုင်းပြည်အပေါ် စိတ်သဘောထားကောင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်မယ့်သူ ဖြစ်တယ်။ သူ့ကို ပြန်ငြင်းခုံရင်လည်း လက်ခံတယ်ဆိုပြီး ၀န်ကြီးတွေကြားမှာ အမှတ်ရခဲ့ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ထောက်လှမ်းရေး အကူအညီနဲ့ အာဏာသိမ်းထားပြီး အခြေမခိုင်သေးလို့ သူ့ကို ဝေဖန်တာတွေကို သည်းခံနေတာ ဖြစ်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အဲဒီအချိန်က ၀န်ကြီးတွေကလည်း သူနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းတွေ၊ သူ့ထက်နာမည်ပိုကြီးပြီး လက်ရဲဇက်ရဲတွေကလည်း စစ်တိုင်းမှူးတွေဆိုတော့ မနိုင်၍ သည်းခံရခြင်းသည် လည်းကောင်းဆိုပြီး ဟဲဟဲဟဲဟဲနဲ့ အရူးဇာတ်နင်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အခြေကျလာချိန်မှာ သူနဲ့မတိမ်းမယိမ်း တိုင်းမှူးတွေကို စစ်တပ်ကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး ၀န်ကြီးတွေ ခန့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ထောက်လှမ်းရေးကို မျက်စပစ်ပြီး သူ့ကို လုံးဝ မကြောက်တဲ့ တိုင်းမှူး လူထွက် ၀န်ကြီးတွေကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အနောက်ဖက် ၀က်တဲလို့ လူတွေ လှောင်ခေါ်တဲ့ န၀တ နေရာမှာ နယကဆိုပြီး အမည်ပြောင်းလိုက်တယ်။ မြို့နယ်အဆင့်ကတော့ မယကပေါ့။ အများက မယားကြောက်လို့ ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ သူနဲ့ မတိမ်းမယိမ်း ၀န်ကြီးတွေကို သုတ်သင်အပြီးမှာ သူ့တပည့်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အရင် ဦးစောမောင် ခန့်သွားတဲ့ ၀န်ကြီးတွေကို ရှင်းလင်းလိုက်တယ်။ ဒါတွေနဲ့ ပြီးရောလားဆိုတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ သူ့ကို ငယ်နိုင်လို ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး တစ်ခုလုံးကိုလည်း အမြစ်ကနေ လှန်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံးကနေ အောက်ခြေ ရဲဘော်အထိ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် ရှင်းပစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြီးတဲ့ အချိန်ကစလို့ သမီးတော်တွေလည်း ထင်တိုင်းကဲလို့ရတဲ့ ဘ၀ကို ရောက်သွားတော့ တာပါပဲဗျာလို့ ခရိုနီ လက်ဟောင်းကြီးက သူ့စကားကို ဒီတစ်ပတ် အတွက် အဆုံးသတ်လိုက် ပြန်ပါတော့တယ်။ ပရိသတ်အတွက် ရှေ့တစ်ပတ် ခင်ဗျား ပြောပြမယ့် ခေါင်းစဉ်လေး ပေးဦးလေဆိုတော့ နောက်တစ်ပတ်လည်း အသောလေးတစ်ခု ဆက်ပြောမယ်ဗျာ။ မချေဖြစ်ခဲ့သော ယတြာနှင့် ညမအိပ် လိုက်ရသော တိုင်းမှူးလို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားလိုက်။ ဒီမှာလည်း ဇာတ်လိုက်တွေ ကတော့ သမီးတော်တွေပဲပေါ့ဗျာတဲ့...။
ဆန်ပြုတ်တစ်ခွက်၊မိုးကာအင်္ကျီတစ်ထည် နှင့် နားမကြားသော လူသုံးယောက် ( ဇာဂနာ )-အာဇာနည်နေ.အကြိုအထူးဆောင်းပါး
7/17/2014 10:05:00 AM articles
မိုးကတဖွဲဖွဲ။ အချိန်က မနက် ၉ နာရီ။ ဖိုဒ်ဆန်ထရပ် ကားတစ်စင်း ဒါလဟိုစီနှင့် ၄၁ လမ်းထောင့်မှာ လာရပ်သည်။ ကားပေါ်က စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူ ၃ဦး ဆင်းလာသည်။ နောက်တော့ သူတို့ လမ်းဖြတ်ကူးသွား၏။ အတွင်းဝန်ရုံး၏ အထွက်ဟု ဆိုင်းဘုတ်တပ်ထားသော စပတ်လမ်းဘက်မှ အတွင်းဝန်ရုံးတွင်းသို့ လမ်းလျှောက် ၀င်သွားကြလေသည်။ ကားအနားမှာ မောင်နီ တစ်ယောက်သာ ကျန်ခဲ့၏။ ယူနီဖောင်း ၀တ်ထားသော ခင်မောင်ရင်နှင့် မှုံကြီးက ခပ်သုတ်သုတ် ရှေ့ကို လျှောက် သွားသော်လည်း ဘညွန့်က တုံ့ဆိုင်းဆိုင်း။ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် အဆောက်အဦဖက်ဆီသို့ ဘညွန့် ထွက်သွားခဲ့လေတော့သည်။
မနက် ၁၀ နာရီ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး၏ ရုံးခန်းမကြီးထဲမှာ ဦးရွှေဘော် (၀န်ကြီးများ ကောင်စီ၏ အတွင်းဝန်)၊ ဦးတင်အုန်း (လက်ထောက် အတွင်းဝန်)နှင့် ရုံးအုပ်ကြီး ဦးခတို့က စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ဖိုင်တွဲတွေ နေရာချထားရင်း အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရုံးခန်းအောက်ထပ် တည့်တည့်မှာ ရဲမင်းကြီး (DIG) ဦးထွန်းလှအောင်၏ ရုံးခန်းရှိသည်။ ထိုအခန်းထဲသို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်နက်ရှ် (Burma command လက်အောက်ခံ တောင်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး) ၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်နိုက်(တ်) (ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်)နှင့် ဗိုလ်ချုပ် သောမတ်စ်တို့ ၀င်လာကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ် သောမတ်စ်၏ ကိုယ်ရေး အတွင်းဝန် ဗိုလ်သန်းဝင်း ကတော့ အထဲလိုက်မ၀င် အပေါ်ထပ်သို့ ဆက်တက်သွားသည်။
ထိုအချိန်မှာပင် အတွင်းဝန်ရုံး ဗဟိုလှေကားကြီး ခြေရင်းသို့ ၀ူစလီကား အနက်ရောင် (ကားနံပါတ် RC/၂၈၇၄ )တစ်စင်း ထိုးဆိုက်လာသည်။ ဗိုလ်ထွန်းလှက ရှေ့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နောက်မှ ဆင်းလာပြီး လှေကားအတိုင်း ခပ်သွက်သွက် တက်သွားတော့၏။
ချင်းရေးရာ အတိုင်ပင်ခံ ၀န်ကြီး ဦးဝမ်ကိုဟောက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို စာတစ်အိတ် ပေးဖို့ရောက်လာရာ ဗိုလ်ချုပ်က အစည်းအဝေးခန်းသို့ ၀င်သွားပြီဖြစ်လို့ ဗိုလ်ထွန်းလှ လက်ထဲသို့ ထိုစာအိတ်ကို ပေးလိုက်သည်။ ထိုစဉ် ဗိုလ်ချုပ်လှမ်းခေါ်သဖြင့် ဗိုလ်ထွန်းလှက အစည်းအဝေးခန်းသို့ ၀င်သွားတော့၏။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂမှ သခင်ဝတင်ကြီးက ဗိုလ်ထွန်းလှ အခန်းသို့ ၀င်လာခဲ့တော့ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်မှမရှိ။ သခင်ဝတင်ကြီးက ထိုင်စောင့်ရကောင်း နိုးနိုး၊ ပြန်သွားရ ကောင်းနိုးနိုးဖြင့် ချီတုံချတုံ။ ထိုစဉ် ဗိုလ်သန်းဝင်းက အခန်းထဲ ၀င်လာ၏။ တစ်ယောက် နှင့် တစ်ယောက်က မသိကြတော့ နှုတ်မဆက်မိ။ သခင်ဝတင်က အခန်းထဲမှ ထွက်သွားတော့သည်။
ဗိုလ်ထွန်းလှ ရုံးခန်းထဲ ပြန်ရောက်လာတော့ ဗိုလ်သန်းဝင်း ထိုင်နေတာ တွေ့ရ၏။ ဗိုလ်သန်းဝင်းက ဗိုက်ဆာသည်ဟုဆို၏။ ဗိုလ်ထွန်းလှကလည်း အစာအိမ် အောင့်နေသလိုလို ဖြစ်နေသောကြောင့် တရုတ်ဆိုင်မှ ဆန်ပြုတ် တစ်ခွက်နှင့် ထမင်းတစ်လုံးမှာ လိုက်သည်။ ရုံးခန်းစောင့် ရဲဘော် လှမောင်က တရုတ်ဆိုင်သွားဖို့ လှေကားမှ ဆင်းလာခဲ့တော့၏။
လှေကားရင်းမှာ မယောင်မလည် လုပ်နေသော ခင်မောင်ရင်က သခင်ဝတင် ဆင်းလာတာရော၊ ရဲဘော်လှမောင် ဆင်းလာတာကိုရော တွေ့လိုက်ရသည်။ ရဲဘော်လှမောင် အနားသို့ကပ်ပြီး ခင်မောင်ရင်က မေးလိုက်၏။ “အစည်းအဝေး စပြီလား”
၄၁ လမ်းထိပ်က ကာကာဆိုင်မှာ မောင်နီနှင့် ဘညွန့်တို့ထိုင်ပြီး လက်ဖက်ရည် သေက်နေကြ၏။ ထိုစဉ် ခင်မောင်ရင် ရောက်လာပြီး ဆိုင်မှ လက်လှည့်ဖုန်းဖြင့် တစ်နေရာသို့ ခေါ်လိုက်သည်။ ခင်မောင်ရင်၏ အသံက တိုးတိုးဖွဖွ “ဆရာကြီး ပစ်စတင် ကွင်းတွေ ကျလာပြီ”
အစည်းအဝေးခန်း အ၀ဆီသို့ ရန်ကြီးအောင်၊ မောင်စိုး၊ သက်နှင်းနှင့် မှုံကြီးတို့ ခပ်သွက်သွက် ရောက်လာကြတော့ ရုံးအကူလေးက ထတားသည်။ မောင်စိုးက ရုံးအကူလေးကို တွန်းဖယ်လိုက်ပြီး တံခါးကို ဆောင့်ကန် တွန်းဖွင့်လိုက်၏။ ရန်ကြီးအောင်က ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပြီး စတင် ပစ်ခတ်လိုက်တော့သည်။ အတွင်းဝန်ရုံး တစ်ခုလုံး သေနတ်သံတွေ ဆူညံပွက်လောထ။
ဗိုလ်ချုပ် သောမတ်စ်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် နက်ရှ်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် နိုက်(တ်)တို့က လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း စကားကောင်းနေသည်။ ဒီလောက် ဆူညံနေသော သေနတ်သံတွေကို သူတို့မကြားချေ။ ဗိုလ်သန်းဝင်းက အထိတ်တလန့်ဖြင့် အခန်းထဲသို့ ပြေးဝင်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကို သေနတ်သမားတွေ ၀င်ပစ်သွားပြီဟု လာပြောတော့ အင်္ဂလိပ် ဗိုလ်ချုပ်တွေ၏ မျက်နှာတွေက ဘာမှမပြောင်းလဲ။ ဦးထွန်းလှအောင်ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး အခန်းထဲက ထွက်သွားတော့သည်။ အပေါ်ထပ်သို့ တက်လို့တောင် ကြည့်မသွားခဲ့ချေ။
ဗိုလ်ထွန်းလှက မိုင်းပွန် စော်ဘွားကြီးကို ပြုစုနေရ၏။ သူ့ဆရာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့ စားပွဲထိပ်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ ၁၃ချက်ဖြင့် ပက်လက်လဲနေပြီ။ သွေးအိုင်ထဲမှာ ၀န်ကြီးတွေ အတုံးအရုံး။ ဦးဗဂျမ်း၊ ပျော်ဘွယ်ဦးမြ၊ ဦးအောင်ဇံဝေတို့ကတော့ အတွင်းဝန် ဦးရွှေဘော်၏ ရုံးခန်းဖက်ဆီသို့ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့လေပြီ။
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး သတင်းဆိုးကြီး ပျံ့နှံ့သွားတော့ မြို့သူမြို့သားတွေ စကားမှ မပြောနိုင်၊ ဆွံ့ကုန် အကုန်ပြီ။ ဆရာ ဒဂုန်တာရာကတော့ ဘာမှမသိ၊ သတင်းဆိုးကိုလည်း မကြားခဲ့။ အတွင်းဝန်ရုံးထဲသို့ အူလည်လည် ရောက်လာခဲ့သည်။ ဆရာဇော်ဂျီ၏ အခန်းထဲသို့ ရောက်တော့မှ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံ ခံလိုက်ရတာ သိသွားတော့၏။
တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ပစ်ခတ်လုပ်ကြတာကို သေသေချာချာ သိသွားသော လူတစ်စုရှိနေသည်။ သူတို့ကား အင်္ဂလိပ် စစ်ဗိုလ်သုံးယောက်၊ ပင်လယ်ဝမှာ ရပ်ထားသော အင်္ဂလိပ် စစ်သင်္ဘောဆီသို့ သူတို့၏ အမြန်ယာဉ် မော်တော်ဘုတ်ကလေးက ဦးတည် သွားလေသည်။
ဆရာဇော်ဂျီကတော့ ကဗျာ တစ်ပုဒ် ချရေးနေလေပြီ။
ထိုမှ ဤမှ တို့လမ်းမ၀ယ်
အုံကြွ မြည်အာ မသာယာကို
ဗိုလ်ထွန်းလှ၏ အခန်းထဲမှာတော့ တစ်စက်မှ မသောက်ရသေးသော ဆန်ပြုတ် တစ်ခွက်နှင့် ပိုင်ရှင်မဲ့ မိုးကာအင်္ကျီ တစ်ထည်တို့ ကျန်ခဲ့လေသည်။ ပြန်လာယူမည့် သူကား ယနေ့ထက်ထိ ပေါ်မလာ ခဲ့တော့ချေ။ ပိုင်ရှင်မဲ့ မိုးကာကတော့ ယနေ့အချိန်အထိ ပဟေဌိ ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
7/14/2014 08:29:00 PM articles
7/13/2014 06:22:00 PM articles
ရွှေသီးရေ . . . ကိုယ့်အမျိုး မကောင်း ကြောင်းကိုယ်ပြောရ တာလောက် ရှက်စရာကောင်း တာမရှိဘူးကွ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်ကမကောင်းတာနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့ မကောင်းတာပဲပြောရတာကိုး။ ဒါကြောင့်လည်း ရှေးမြန်မာကြီး တွေက ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန် ထောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုး ပြောခဲ့ကြတာဖြစ်မယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဈေးကြီး တစ်ဈေးထဲကိုရောက်သွားတယ်။ အိမ်မှာ လိုအပ်တာလေးဝယ်ဖို့ ပေါ့။ အဲဒီဈေးထဲမှာ မီးဖိုရောင်း တဲ့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကပ်လျက်ရှိတယ် ကွ။ ဆိုင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့် ပြီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲရွေးဝင်လိုက် တယ်။ သူ့ဆိုင်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ မီး ဖိုတွေထဲမှာ ငါလိုချင်တဲ့မီးဖိုဆိုဒ် မတွေ့ရဘူး။ ဒါနဲ့ ငါကဆိုင်မှာရှိ နေတဲ့မီးဖိုတစ်လုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီး ဒီထက်သေးတဲ့ဆိုဒ်ရှိ လားလို့မေးလိုက်တယ်။ သူကရှိ တယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ထဲကမီးဖိုတစ်လုံး ကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ သူပြတဲ့ မီးဖိုက ငါလိုချင်တာထက်ကြီးနေ သေးတယ်။ ဒါနဲ့ ငါက နောက် တစ်ဆိုဒ်ကောရှိလားလို့မေးမိ တယ်။ သူက မျက်နှာခပ်တည် တည်နဲ့ ခင်ဗျားက နံပါတ်ဘယ် လောက်လိုချင်တာလဲတဲ့။
ကဲ. . . မင်းသာစဉ်းစား ကြည့်။ ငါတို့လိုဈေးဝယ်သူတွေ ဟာ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ဆိုဒ် နံပါတ်ကို ဘယ်သူကသေသေချာ ချာသိမှာလဲ။ တချို့ပစ္စည်းတွေက နံပါတ်ကြီးလေ ဆိုဒ်ကြီးလေဆို ပေမယ့် တချို့ကတော့ ပြောင်း ပြန်။ မီးဖိုနံပါတ် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ မှာ ဘယ်ဟာကအကြီး၊ အသေးဆို တာမသိနိုင်ဘူးလေ။ ဒါနဲ့ ငါက ရေနွေးအိုးဆိုင်ကပြောတာ ရေ နွေးအိုးဆိုဒ်က7တဲ့။ အဲဒါနဲ့ အဆင်ပြေတာလိုချင်လို့ဆိုပြီး အရွယ်အစားကိုတောင် လက်နဲ့ ဝိုင်းပြလိုက်တယ်။ ဒီမှာတင် ဆိုင် ရှင်က မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ခင်ဗျားအိမ်ပြန်ပြီး ရေနွေးအိုးကို တိုင်းလာခဲ့။ ပြီးတော့မှလာဝယ် လို့ပြောပြီး ကုလားထိုင်မှာသွား ပြန်ထိုင်နေတယ်။ ငါ့ကိုလည်း လာရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပေါ့ ကွာ။ ငါလည်း ဒေါသထွက်ထွက် နဲ့ သူနဲ့ကပ်လျက်ဆိုင်ဘက်ကို ကူးခဲ့ရတယ်။
နောက်တစ်ဆိုင် ရောက် တော့ ခုနဆိုင်မှာ ငါပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲပြောတာပါပဲ။ ဆိုင်ရှင် က အစ်ကို ခဏနော်ဆိုပြီး သူ့ဆိုင် ထဲက မီးဖိုတစ်လုံးဆွဲထုတ်လာ တယ်။ ရေနွေးအိုးဆိုဒ်7ဆိုရင် ဒီ မီးဖိုနဲ့ကွက်တိပဲ။ မရရင်ပြန်လာ လဲ။ အစ်ကို့ဆိုက်ကားခ ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောပြီး မီးဖိုဆို ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုသုံး အကြမ်းခံ တယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုတော့ မသုံးနဲ့ဆိုပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြနေသေးတယ်။ ငါလည်းသူ့ ဆီကမီးဖိုအကြီးတစ်လုံး အသေး တစ်လုံးဝယ်လာခဲ့တယ်။
ငါ နောက်ထပ်ပန်းကန်ဆိုင် ဘက်ကိုကူးတယ်။ အချိုပန်းကန် ပြားအချပ်သုံးဆယ်မှာတယ်။ငါ လိုချင်တဲ့အဆင်လေးရွေးပြီး ဈေးညှိပိုက်ဆံပေးပြီးတခြားပစ္စည်း ဝယ်ဖို့သွားမယ်ဆိုတော့ ပန်းကန် ဆိုင်ရှင်က အိုကေ အစ်ကို။ ကျွန် တော်သေသေချာချာစစ်ပြီးထည့် ထားလိုက်မယ်တဲ့။ ငါဈေးတစ် ပတ်ပတ်ပြီးပြန်လာတော့ ပန်း ကန်တွေထုပ်ပိုးပြီးနေပြီ။ အိမ် ရောက်လို့ အချိုပန်းကန်ပြားတွေ ဖြေကြည့်လိုက်တော့ ငါပြခဲ့တဲ့ အဆင်ဒီဇိုင်းက ငါးချပ်ပဲပါတယ်။ ကျန်တာတွေက တခြားဒီဇိုင်းတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ငါ့မှာ ပစ္စည်းတွေ ကလည်းအရေးတကြီးလိုနေချိန်၊ အလုပ်ကလည်းရှုပ်နေချိန်ဆို တော့ ဆိုင်ကိုဘယ်လိုမှသွားပြန် လဲဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ပန်းကန်လုံးက ဆင်တူ။ အောက်ခံ ပန်းကန်ပြားကတကွဲတပြားဖြစ် နေတဲ့အခြေအနေကို မင်းမျက်စိ ထဲမြင်ကြည့်လိုက်လေ။ ဒါနဲ့ ဆိုက်ကားဆရာကိုလွှတ်ပြီး ပန်း ကန်လဲရင်လဲပေး၊ မလဲရင်လည်း ပိုက်ဆံပြန်ပေးပါလို့ခိုင်းရတော့ တယ်။
ရွှေသီးရေ . . . လူမှုကွန်ရက် တွေပေါ်မှာ၊ ကျေးရွာရပ်ကွက် တွေမှာ ဘာသာခြားဆိုင်ကပစ္စည်းတွေမဝယ်ဖို့၊ ဘာသာခြားပစ္စည်းကိုမသုံးဖို့ လှုံ့ဆော်အော်ဟစ် နေသူတွေကို ငါသတိရမိတယ်။ ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးနဲ့ မချေမငံပြောလိုက်တဲ့မီးဖိုဆိုင်က ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်။ ငါဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်က ဘာသာခြားရောင်း တဲ့ဆိုင်ကွ။ ဒီလိုပဲ ပန်ကန်ပြားလဲလိုက်တဲ့ဆိုင်ကလည်းဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ပဲလေ။ ကိုယ်နဲ့ဘာသာတူ၊ မျိုးနွယ်တူသူတွေက ကိုယ့်ကို လာအားပေးတဲ့ဖောက်သည်ကို ရန်သူသဖွယ်ဆက်ဆံပြီး ဘာသာခြားကနှိမ့်ချရိုကျိုးစွာနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေ တာကို တို့ကဘာကိုရွေးချယ်မှာ လဲ။ မျက်စိမှိတ်ပြီး တို့ဘာသာ မှတို့ဘာသာ၊ တို့အမျိုးမှ တို့ အမျိုးလို့ အံကြိတ်သည်းခံပြီးအမျိုး ဘာ သာကို ချစ်ပြရမှာလား ရွှေသီး။
တို့ကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓ က လောကုတ္တရာသံသရာအကျိုး ကိုတင်မဟုတ်ဘူး။ လောကီပစ္စု ပ္ပန်အကျိုးအတွက်လည်း ညွှန်ပြ ခဲ့တာပဲလေ။ ဈေးသည်တွေမှာရှိ အပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကို အဂုင်္တ္တရ နိကာယ်၊ တိကနိပါတ်၊ ပါပဏိက သုတ်မှာဟောကြားခဲ့သတဲ့။ အဲဒါကို မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ သရက်ဆရာတော်ရှင်ပညာဝရ က ကြီးပွားချမ်းသာရေးအတွက် ဈေးသည်ကုန်သည်၏အင်္ဂါရပ် ခြောက်ပါးဆိုပြီး ဆောင်းပါးတစ် ပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးတယ်ကွ။ ဈေးသည်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေထဲမှာ နံပါတ်(၁)က ပညာမျက်စိတဲ့။ ဘယ်ကုန်ကို ဘယ်ကယူပြီး ဘယ်မှာဘယ်ဈေး နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ နံပါတ်(၂)က လုံ့လဝီရိယတဲ့။ ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သုံးက ကျတော့ အမှီရှိခြင်းတဲ့။ ဒါကငွေ ကြေးအရင်းအနှီးအဆက်အသွယ်ပံ့ပိုးတဲ့လူပေါ့။ နံပါတ် (၄)က ပုဗ္ဗ ဏှသမယံသက္ကစံ္စကမ္မံအဓိဋ္ဌာတိ လို့ဆိုတယ်။ နံနက်အခါရိုသေစွာ ရောင်းဝယ်ခြင်းအမှုကိုပြုစီရင် ခြင်း၊ နံပါတ် (၅)က နေ့အခါ၊ နံပါတ်(၆)ကညချမ်းချိန်ခါမှာ ရိုသေစွာရောင်းဝယ်ခြင်းအမှုကိုပြုပြင်စီရင်ခြင်းလို့ဟောကြားခဲ့သတဲ့။
ပြောရရင်တော့ ဈေးရောင်း သူတစ်ယောက်ဟာ နံနက်အခါ ဖြစ်စေ၊ နေ့လယ်အခါဖြစ်စေ၊ ည ချမ်းအခါဖြစ်စေ ဈေးရောင်းတဲ့ကိစ္စကို ရိုသေစွာပြုရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဈေးဝယ်လာသူတွေရဲ့ဈေး ဆစ်တာ၊ စူးစမ်းမေးမြန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်သူရဲ့အပြော အဆို အယွင်းအမှားချို့ယွင်းချက် တွေ ကို စိတ်မတို၊ အမျက်မပွားဘဲ စိတ်ရှည်ရှည်သဘောထားကြီး ကြီးလိုက်လျောဆက်ဆံရမယ်။ ဈေးဝယ်ဖို့လာတဲ့လူအားလုံးဟာ မိမိကြီးပွားတိုးတက်စေဖို့ လာ ရောက်ချီးမြှောက် အားပေးနေ တယ်ဆိုတာကို အမြဲတစေအမှတ် ရနေရမယ်။ အဲဒါဟာ ရိုသေစွာ ရောင်းဝယ်ခြင်းအမှုကိုပြုတာပဲ ပေါ့။
ရွှေသီးရေ နောက်ထပ်ငါ ကြားဖူးတာလေးတစ်ခုရှိသေး တယ်။ တို့ငယ်ငယ်က တို့ကိုစာ သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးနှုတ် တိုက်ချပေးခဲ့တာကွ။ ဆရာတော် ကတော့ ဘုရားဟောလို့ပြောတာ ပဲ။ ဘယ်ပါဠိမှာပါတယ်တော့ မပြောခဲ့ဘူး။ ဈေးသည်အင်္ဂါ ခြောက်ပါးကို လင်္ကာလေးနဲ့ရွတ် ရတယ်။ ဈေးသည်တွေဆောင်ရန် ကဖိတ်ခေါ်၊ မေးမြန်း၊ စုံစမ်း၊ ရွေး ချယ်၊ မေးဖွယ်အပို၊ ဆိုဖွယ်လော ကွတ်၊ ဈေးသည်ဝတ်တဲ့။ နောက် ရှောင်ရန်ခြောက်ပါးက ရန်လိုညှိုး ရော်၊ ဆိုင်ပေါ်ပွေရှုပ်၊ ကိုယ်နေ မသစ်၊ ပုဆစ်ကြွေအန်၊ မတန် ဝတ်စား ဤခြောက်ပါး ရှောင်ရှား ဈေးသည်ဝတ်တဲ့လေ။
ဗုဒ္ဓဟာ တရားတွေကို ဟောဖော်ညွှန်ပြတဲ့အခါမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ဆိုပြီး ဟောကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဝါဒကို သက် ဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ မသက်ဝင်သည် ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသြဝါဒနဲ့ ညီနေရင် လောကကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေတာပဲ။ လူမှုဝန်းကျင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာတာပဲ လေ။ ငါတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာကွဆို ပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသြဝါဒဆိုတာ ကို နည်းနည်းမှမသိ၊ နည်းနည်းမှ မကျင့်သုံးရင်တော့ လူမှုဝန်းကျင် ရဲ့အန္တရာယ်၊ လောကကိုဆိုးကျိုး သယ်ဆောင်လာသူသာဖြစ်မှာ ပေါ့။ ခုပဲကြည့်လေ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား တော်မြတ်ကို ဆိုင်ပေါ်တင်ကိုး ကွယ်ထားတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်က ဗုဒ္ဓ ဟောကြားတဲ့ဈေးသည်ကျင့်ဝတ် နဲ့ဖီလာတဲ့အပြုအမူကိုပြုမူလိုက် ချိန်မှာ ဗုဒ္ဓတရားဆိုတာကို နကန်းတစ်လုံးမှမသိတဲ့ တခြားဘာသာ ဝင်တစ်ဦးက ဗုဒ္ဓသြဝါဒနဲ့ညီတဲ့ ဈေးသည်အင်္ဂါနဲ့ မေးဖွယ်အပို၊ ဆိုဖွယ်လောကွတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ဈေးဝယ်သူတွေဘယ် လောက်စိတ်ချမ်းသာရသလဲ။
ရွှေသီးရေ . . . လူမျိုးကို အကြောင်းပြု၊ ဘာသာကိုရှေ့ တန်းတင်ပြီး ဟိုဆိုင်မှာမဝယ်နဲ့ ဒီဆိုင်ကိုအားမပေးနဲ့၊ ဟိုပစ္စည်း မသုံးနဲ့လို့ မစ္ဆရိယတွေနဲ့ တားဆီး နှောင့်ယှက်နေမယ့်အစား ဗုဒ္ဓ ဟောကြားခဲ့တဲ့ဈေးသည် အင်္ဂါ ရပ် လက္ခဏာတွေကိုသာ မင်း ကျင့်သုံးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ရင် မင်း ဆိုင်မှာဝယ်သူတွေတန်းစီစောင့် ဆိုင်းနေပါလိမ့်မယ်။ မင်းကိုယ် တိုင်လည်း ဈေးဝယ်ချိန်မှာ ဈေး သည်အင်္ဂါရပ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆိုင်ကို သွားမှာမဟုတ်လား။ မင်းဈေးက ပြန်လာတဲ့အခါမှာ လူတွေကမင်း ကိုဘယ်ဘာသာဝင်ဆိုင်ကဝယ်ခဲ့ သလဲလို့ ဘယ်တော့မှ မမေးဘူး။ ဘာဝယ်ခဲ့သလဲလို့ပဲမေးမှာ မောင်ရွှေသီး။ ။
7/13/2014 08:55:00 AM articles
နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းနှင့် မကြာခဏဆိုသလို ခရီးအတူသွားဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ ကျင်းပကြရာ စာပေဟောပြောပွဲများ၌လည်း အတူတကွ ပွဲပေါင်းများစွာ တက်ရောက်ဟောပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ လူသားတို့၏ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာဦးအောင်သင်း တစ်ခါတစ်ခါ ထည့်သွင်းပြောဆိုလေ့ရှိသည့် ထေ့လုံးငေါ့လုံးကလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ၌ ယခုတိုင်စွဲငြိလျက်ရှိပါသည်။ သည်လိုပါ။
တစ်နေ့သ၌ လူယဉ်ကျေးဟုဆိုသူတစ်စုတို့ လူရိုင်းတို့ ကျက်စားနေထိုင်ကြရာ ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းရှိရာဆီသို့ အမှတ်မထင်ရောက်ရှိ၍ သွားခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါလူရိုင်းတို့မှာ မည်ကာမတ္တလူရိုင်းများမဟုတ်ကြဘဲ လူသားစားသည့် တကယ့်လူ့အရိုင်းအစိုင်းများ အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာဘေးရီးယန်း (Barbarian) မျိုးနွယ်များဟုပဲ ဆိုကြပါစို့။
သို့ဖြင့် အရိုင်းနှင့် အယဉ်တို့ တွေ့ကြလေရာ အယဉ်များက အရိုင်းများကို အထင်သေးစွာဆက်ဆံပါသည်။ လူသတ်သလားဟုမေးရာ အရိုင်းတို့က သတ်ကြောင်းဝန်ခံပါသည်။ သတ်ပြီးတော့ စားသလားဟု ထပ်မေးရာ စားကြောင်း ၀န်ခံပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အယဉ်များက ဒါ့ကြောင့်ရိုင်းတာဟု မှတ်ချက်ပေးပါသည်။
ထို့နောက် အရိုင်းတို့က မေးခွန်းမေးသော အလှည့်ဖြစ်ပါသည်။ မင်းတို့လူတွေရော တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တိုက်ကြ၊ ခိုက်ကြ၊ သတ်ကြ၊ ဖြတ်ကြသလားဟုမေးရာ အယဉ်တို့က တိုက်ကြောင်း၊ ခိုက်ကြောင်း၊ သတ်ကြောင်း၊ ဖြတ်ကြောင်း ၀န်ခံပါသည်။ အရိုင်းတို့က သတ်ပြီးလျှင် စားသလားဟုမေးပါသည်။ အယဉ်တို့က မစားပါကြောင်း ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန်ပါသည်။
ဤ၌ လူရိုင်းတို့က ကောက်ချက်တစ်ခု ဆွဲပါလေတော့သည်။ ငါတို့တွေက စားဖို့အတွက်သတ်တာ။ မင်းတို့တွေက မစားဘဲနဲ့ အကြောင်းမဲ့သက်သက်သတ်တာ။ ဒါ့ကြောင့် မင်းတို့တွေက ပိုပြီးတော့ ရိုင်းတာတဲ့။
ဆရာကြီးဦးအောင်သင်း၏ ဟောပြောမှု အတတ်ပညာအောက်မှာ ပရိသတ်၏ သြဘာပေးသံများက ကျွက်ကျွက်ညံလို့။
ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရိုင်း၊ မရိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်လာခဲ့ပါပြီ။ လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အကြောင်းမဲ့သက်သက် ရန်ပြုသတ်ဖြတ်နေကြသော ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေသည် တကယ့်ကိုယဉ်ကျေးသော ကမ္ဘာသို့ ရောက်ရှိနေခဲ့ကြပြီဆိုသည်မှာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစ။
လူတစ်ယောက်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်မှာ ထိုသူ၏စရိုက်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ သုစရိုက်သမားလား၊ ဒုစရိုက်သမားလား၊ ဓမ္မ၀ါဒီလား၊ အဓမ္မ၀ါဒီလား။ သုစရိုက်သမားဆိုလာ၊ ဒုစရိုက်သမားဆိုသွား။ ဓမ္မ၀ါဒီဆိုလာ၊ အဓမ္မ၀ါဒီဆိုသွား။ ဒါပဲဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဟစ်တလာကို မုန်းကြသည်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံသားဖြစ်နေ၍ မုန်းကြသည်မဟုတ်ပါ။ အိုစမာဘင်လာဒင်ကို ရွံကြသည်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေ၍ ရွံကြခြင်းမဟုတ်ပါ။ မူဆိုလိုနီကို စက်ဆုပ်ကြသည်မှာ လူဖြူဖြစ်နေ၍ စက်ဆုပ်ကြခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူတို့၏ ရက်စက်သော နှလုံးသားနှင့် ကြမ်းကြုတ်သော လုပ်ရပ်များကို အခြေခံကာ မုန်းကြ၊ ရွံကြ၊ စက်ဆုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဆို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည့် အိန္ဒိယသမ္မတဖြစ်ခဲ့သူ အဗ္ဗဒူကလာမ်ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ အဘယ့်ကြောင့် လေးစားနေကြပါသလဲ။ ဟိန္ဒူစစ်စစ်ကြီးဖြစ်သည့် မဟတ္တမဂန္ဒီကြီးကိုရော ကျွန်တော်တို့ အဘယ့်ကြောင့် ချစ်နေကြတာပါလိမ့်။ ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်သက်ဝင်သူ မာသာထရီဆာကိုရော ကျွန်တော်တို့ အဘယ်ကြောင့် မြတ်နိုးနေကြတာပါလိမ့်။ အိုင်းစတိုင်းဟာ ဂျာမနီမှာ မွေးတဲ့လူကြီးပါဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ မုန်းခဲ့ကြလို့လား။ ရှင်းပါသည်။သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့ချစ်တာ၊ လေးစားတာ၊ မြတ်နိုးတာများသည် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတွေ၊ လူမျိုးတွေ၊ နိုင်ငံတွေနှင့်မဆိုင်။ သူတို့၏စရိုက်နှင့် သူတို့၏နှလုံးသားများကို ချစ်ခင်လေးစားမြတ်နိုး၍ တန်ဖိုးထားနေခြင်းသာပါ။
ဆရာကြီးအက်စ်အက်စ်ဂိုအင်ကာကို မြန်မာတို့ အသိအရှိများပါသည်။ နာမည်အတိုကောက်က S.S.Goenka။ အပြည့်အစုံခေါ်တော့ Shyam Sunder Goenka ။ ၁၉၃၂ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင်မွေးပြီး ၂၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်၌ အနိစ္စရောက်ရရှာသည့် ၀ိပဿနာဆရာကြီးဂိုအင်ကာ။
ဆရာကြီး၏ စာတစ်အုပ်ကို ဆရာပါရဂူဘာသာပြန်ဆိုဖူးပါသည်။ ‘‘ဓမ္မ၊ ဘ၀တစ်လျှောက် နေသွားနည်း အနုပညာ’’တဲ့။
သည်စာအုပ်ထဲမှာ ဆရာကြီးဂိုအင်ကာက မေးခွန်းတချို့မေးထားခဲ့ပါသည်။ လူသတ်တာ မကောင်းဘူး။ လိမ်တာမကောင်းဘူး။ ခိုးတာမကောင်းဘူး။ သူတစ်ပါးသားမယား ပစ်မှားတာမကောင်းဘူး။ အဂတိတရားလိုက်စားတာ မကောင်းဘူး။ လောဘကြီးတာ မကောင်းဘူး။ ဒေါသကြီးတာ မကောင်းဘူး။ မောဟကြီးတာ မကောင်းဘူး … စသည် စသည်များ ….။
ဆရာကြီးဂိုအင်ကာက ဘယ်သူ့အတွက်မကောင်းတာလဲတဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် မကောင်းတာလားတဲ့။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက် မကောင်းတာလားတဲ့။ ဟိန္ဒူအတွက်ကရောတဲ့။ အစ္စလာမ်တွေအတွက်ကရောတဲ့။ ဂျာမန်တွေက ကျူးလွန်ရင်ကောင်းသလားတဲ့။ ရုရှတွေက ကျူးလွန်ရင် ကိစ္စမရှိဘူးလား။ အမေရိကန်တွေက ကျူးလွန်ခွင့်ရှိသလား။
ဘာမှမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်ရသော်လည်း ချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုဆိုတာ လူမျိုးနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာနဲ့ အသားအရောင်နဲ့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အရာမျိုးမှ မဟုတ်တာလား။ လုပ်ရပ်နဲ့သာ သတ်မှတ်ကြရတာမျိုးပါ။
ဒုစရိုက်မှုတစ်ခုကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်က ကျူးလွန်ခဲ့သော် ထိုကျူးလွန်သူ၌ အပြစ်ရှိပါသည်။ ထို့အတူ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ မည်သူမဆို ကျူးလွန်လျှင် ကျူးလွန်သူ၌ အပြစ်ရှိပါသည်။ မကျူးလွန်သူတို့နှင့် ဘာမှမဆိုင်။ ထိုင်းလူမျိုးတစ်ယောက်က ကျူးလွန်ခဲ့လျှင်လည်း ထိုကျူးလွန်သူ ထိုင်းလူမျိုး၌ အပြစ်ရှိပါသည်။ ကျန်ထိုင်းလူမျိုးများနှင့် ဘာမှမဆိုင်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာပေါ်၌ မည်သို့သော ပြစ်မှုကိုမှ မကျူးလွန်သည့် လူသားတို့အပေါ် မည်သည့်ဘာသာဝင်ပဲဟု၊ မည်သည့်လူမျိုးပဲဟု၊ မည်သည့် နိုင်ငံသားပဲဟု တံဆိပ်ကပ်ကာ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် ညှဉ်းပန်းနေကြသည်များမှာ လူယဉ်ကျေးတို့ကမ္ဘာမှ ဟုတ်ပါလေစဟု မေးရတော့မည့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်။
အမုန်းတို့ အချစ်တို့ဆိုသည်မှာ ကိုးကွယ်ရာတွေ၊ လူမျိုးတွေ၊ နိုင်ငံတွေနှင့်မဆိုင်ပါ။ လုပ်ရပ်နှင့်သာ ဆိုင်ပါသည်။ မျိုးမတူသည့်သတ္တ၀ါကို ရန်ရှာလိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်တို့၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီးဦးအောင်သင်း၏ ထေ့လုံး၊ ငေါ့လုံးကလေး ပြန်ကောက်ပါရစေ။ မစားဘဲနဲ့ မင်းတို့က လူအချင်းချင်း သတ်နေကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မင်းတို့ကပိုရိုင်းတယ်တဲ့။ အသားစားလူရိုင်းတို့၏ ကောက်ချက်စကား။
7/12/2014 02:00:00 PM articles
7/12/2014 08:42:00 AM articles
ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွား သည်။ ကျွန်တော်မကြားဖူးသည့် ‘‘အီသီယိုးပီးယားသား’’ဟူသည့် စကားလုံး။ ကျွန်တော်အစားကြီး တာကို အီသီယိုးပီးယားသားသေ လို့ဝင်စားတာဟု ဘာကြောင့်ပြော ရသနည်း။ ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း ဦးလေးကို ကျွန်တော်မေးတော့ သည်။ ဦးလေးက နှုတ်နှင့်မဖြေ။ သူဖတ်နေသော မဂ္ဂဇင်းတစ် စောင်ကိုလှန်လျက် ‘‘ရော့၊ ဟော ဒီမှာကြည့်။ အဲဒါအီသီယိုးပီးယား နိုင်ငံက ကလေးတွေပဲ’’ဟုပြလေ ၏။ ဗိုက်ပူနံကား၊ နံရိုးအပြိုင်း ပြိုင်း၊ မျက်တွင်းကဟောက်ပက်၊ မျက်လုံးများက အရောင်မွဲခြောက် ခြောက်။ သူတို့ကိုကြည့်ရသည် မှာ ဘယ်တုန်းကတည်းက အစာ ရေစာဝဝလင်လင်မစားခဲ့ရသည် မသိ။ ဩော်.. ကျွန်တော်အငမ်း မရစားနေတာဟာ အရင်ဘဝက အီသီယိုးပီးယား တိုင်းပြည်မှာ ငတ်ခဲ့လို့။ ယခုအစားအသောက် ပေါသည့် မြန်မာပြည်မှာ လူလာ ဖြစ်ချိန် ဣနြေ္ဒပျက်လောက် အောင် ပန်းကန်ပြောင်သည်အထိ လျက်ပက်ပြီး စားနေခြင်းဟု အမေတို့ကမှတ်ယူကာ ကျွန်တော့်ကို အီသီယိုးပီးယားသား ဝင်စားတာဟု ပြောခြင်းဖြစ်လေသည်။
ယခု ဆယ်စုနှစ်သုံးစုကျော် အကြာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် မည်သည့်အခြေသို့ ဆိုက်ရောက် နေပြီနည်း။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က နောက် ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်သည့်စာရင်း အရ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးစာရင်း တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အောက် ဆုံးကပြန်ရေလျှင် အဆင့် ၁၂ ၌ ရပ်တည်နေကြောင်း သတင်းများ တွင် ဖတ်ရသည်။ ဟိုအရင်ကိုယ့် နိုင်ငံပြည်သူများထက် ဆင်းရဲ သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ အီသီယိုးပီးယား နိုင်ငံများပင် ကိုယ့်နိုင်ငံထက်ပို၍ ချမ်းသာနေ ကြပြီ။ ဒေသတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံ များတွင် အောက်ဆုံးအဆင့် ရောက်နေပြီး အာရှဒေသတွင်း၌ ဒုတိယအဆင်းရဲဆုံးဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည်ပင် ကိုယ့်နိုင်ငံနှင့် အဆင့်ငါးဆယ် ကွာခြားနေသည်ဟုဆို၏။ ခုနေများ အီသီယိုးပီးယားကလေးတစ်ယောက်က အငမ်းမရစားနေတာကို သူတို့လူကြီးတစ်ယောက်ကများ တွေ့သွားလျှင် မြန်မာသေပြီး ဝင်စားတာဟု ပြောများပြောလေမလားမသိ။
ဘယ်မှမထွက်ဘဲ ကိုယ့်အိမ် ထဲမှာပဲကိုယ်နေပြီး အစိုးရသတင်း စာလေးဖတ်၊ MRTV တို့၊ မြဝတီ တို့လောက်ပဲ ဖွင့်ကြည့်နေလျှင် တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့အချမ်း သာဆုံးလောက်ထင်ချင်ထင်မိပေ လိမ့်မည်။ ကိုယ့်အိမ်ကခွာလို့ တခြားမြို့ရွာများကို လိုက်မကြည့် နိုင်လျှင်နေပါ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်း ကျင်လောက်ကိုပဲ ဂရုစိုက်သတိ ထားကြည့်ရုံနှင့်ပင် နိုင်ငံ၏ပကတိ အခြေအနေကို မြင်နိုင်ပေသည်။ ကုန်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်လဆန်း ၁ ရက် ၂ ရက်လောက်က ညနေ ၆ နာရီ ခွဲသာသာလောက် ကျွန်တော် အလုပ်မှပြန်အလာ အိမ်နားက ဆိုက်ကားဆရာမိသားစုကို လမ်း ထိပ်က ဝက်သားတုတ်ထိုးဆိုင်မှာ ကျကျနနထိုင်စားနေတာတွေ့ရ ၏။ ဆိုက်ကားဆရာလင်မယား နှင့် ကလေးနှစ်ဦး။ သူတို့က ကျွန် တော့်ကိုတောင်လှမ်းပြီး ဆရာ စားသွားပါဦးဟု ဧည့်ဝတ်ပြုလိုက် သေး၏။ ကျွန်တော်က ‘‘ဒီမိသား စုတွေ ဒီနေ့ထောနေပုံရတယ်’’ဟု ဆိုတော့ ‘‘အထင်မကြီးနဲ့ဆရာ ရေ’’တဲ့။ ‘‘အုံနာခရှင်းလိုက်တာ ဆန်ဖိုးတောင်မကျန်လို့ ဆန်ပြုတ် ပြုတ်သောက်ပြီး ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံ လေးနဲ့ ဒီမှာ အာသာလာဖြေတာ’’ တဲ့။ ဆိုက်ကားဆရာက ရယ်ရယ် မောမော ပြောလိုက်သော်လည်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ ဆို့ဆို့ နင့်နင့်ခံစားလိုက်ရသည်။ ဒါ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပင် တွေ့လိုက်ရသည့်် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်၏။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် သည်လိုပုံရိပ် ဆိုးတွေ ဘယ်လောက်များနေ မလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ရုံနှင့်သိနိုင် လေသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လစဉ် မိန့်ခွန်းများတွင်တော့ နိုင်ငံ၏ GDP မည်မျှတိုးတက်လာကြောင်း တွေ ခဏခဏပြောသံကြားရ သည်။ ဒုတိယသမ္မတဦးဉာဏ် ထွန်းကလည်း လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမှုနှုန်းကို ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ၅ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်း ပသော အကြိမ် (၂၀)မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သမဝါယမ နေ့အခမ်းအနားတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားကြောင်း သတင်း များတွင် ဖတ်ရသည်။ လေထဲ ဆောက်သည့် အိမ်ကလေးများ မဖြစ်ပါနှင့်ဟုသာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူများက ဆုတောင်းရပါ သည်။
ပြန်တွေးကြည့်လျှင် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ ဤမျှဆိုးရွားသွားကာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးအဆင့် ၁၂ အထိ ရောက်သွားသည်ကတော့ ရင်နာစရာကောင်းလှ၏။ လွတ် လပ်ရေးရပြီးစ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်တွင် အာရှမှာဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ဖို့ အလားအလာအကောင်း ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပဏ္ဍိတ်ကြီးများက ဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှု လွဲမှားခြင်း၊ တိုင်းပြည်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သူများ၏ အရာရာကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအမြင်နှင့် သာ ကြည့်ခဲ့ခြင်း၊ နယ်ပယ်အသီး သီးတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ချောင်ထိုးခံရခြင်း၊ တိုင်းပြည်၏ ကဏ္ဍစုံတွင် လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းညိတ်များနှင့် မိုးကျရွှေ ကိုယ်များသာ နေရာရလာခြင်း စသော အကြောင်းပေါင်းစုံဖြင့် တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေသည် အဘက်ဘက်မှ ယိုယွင်းကာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် LDC နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်ခဲ့ရလေသည်။
ထိုကာလများအတွင်း ကျွန် တော်တို့ပြည်သူများ၏ အခြေ အနေကို ပြန်ကြည့်လျှင်လည်း လူချင်းတူတူ သူချင်းမျှမျှမနေခဲ့ ကြရပေ။ လူမည်ကာမတ္တဘဝမျိုး ဖြင့်နေခဲ့ကြရ၏။ နိုင်ငံခြားသွား ခွင့်ရခြင်းကိုပင် ထူးခြားသော အခွင့်အရေးအဖြစ်မှတ်ယူကာ ဆိုဗီယက်ပြန်ဒို့စိန်ကုလား၊ ဆိုဗီ ယက်ပြန်နွဲ့နွဲ့စန်း၊ ယိုးဒယားပြန် အမာစိန် စသဖြင့် ကိုယ်ရောက် ဖူးသည့်နိုင်ငံကို ဂုဏ်ထူး၊ ဘွဲ့ထူး တစ်ခုလိုသဘောထားပြီး အမည် ရှေ့ကတပ်ခဲ့ကြ၏။ ရွှေဝါဆပ် ပြာ၊ သွားတိုက်ဆေး စသည့် ပစ္စည်းများကို ပါတီ၊ ကောင်စီလူ ကြီးတစ်ဦးဦး၏ လက်မှတ်ပါ သော ပါမစ်စာရွက်ဖြင့် သမဆိုင် မှာ သွားဝယ်ရသည်။ ဒါတောင် အရောင်းစာရေးမက ‘‘ကုန်နေ တယ်’’ဟု ငြင်းထုတ်လိုက်လျှင် ကိုယ့်ပါမစ်ကလေး အလဟဿ ဖြစ်သွားမှာစိုး၍ သံပရာသီးဆယ် လုံးလောက်စားထားသလို မျက် နှာကို အစွမ်းကုန်ဖြီးထားပြီးမှ ဝယ်ရသည်။ ယခုအသက် (၅၀) အထက်ရှိသူများအားလုံး ကြုံဖူး ကြပါသည်။
သူများနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော် တို့မမွေးခင်ကပေါ်နေသော တီဗီ ကို ဒုတိယနှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားဘဝကျမှ စမြင်ဖူးသည်။ ကျွန်တော်နှင့် သက်တူရွယ်တူ အိုဘားမားက (၉)နှစ်အရွယ်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက သူ့အဘိုးအိမ် ဧည့်ခန်းထဲမှာ တီဗီထိုင်ကြည့်နေ ချိန်တွင် ကျွန်တော်ကတော့ နေ ရှင်နယ်ရေဒီယိုအဟောင်းကလေး ဖွင့်ပြီး နားထောင်နေရတုန်းရှိသေး ၏။ ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တန်တစ်ရာ ဆန်စက်ကြီးလာတည်တော့ ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာတွေသောက်သည့် ရေသန့်ကိုအထူးအဆန်း သဖွယ်ငေးကြည့်ခဲ့ရသည်။ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကြီး၏ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံတကာနှင့် အဆက်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှစ၍ ပညာရေးကဏ္ဍအဆုံးအားလုံးကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ဖြင့် သွားခဲ့ရာ နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်လိုက်လျှင် အစစအရာရာ နောက်ကျခဲ့ရလေသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နဝတ၊ နအဖ အစိုးရအဆက်ဆက် တွင်လည်း တိုင်းပြည်၏ စီမံခန့်ခွဲ ခွင့်ရှိသည့်နေရာမှန်သမျှ တပ်မတော်အရာရှိများကသာ နေရာ ယူခဲ့ကြပြီး ကြက်ဆူပင်စီမံကိန်း လို လွဲမှားသောစီမံကိန်းများဖြင့် တိုင်းပြည်သည် ဖွတ်သထက်ညစ် ခဲ့ရလေသည်။ အဆိုးရွားဆုံးမှာ တကယ် တတ်ကျွမ်းနားလည် သည့် ပညာရှင်များ၏ အကြံ ဉာဏ်များကိုကျတော့ သူတို့ သဘောထားနှင့်ဆန့်ကျင်လျှင် လက်မခံ။ ကိုယ်ကျိုးရှာ ခရိုနီများနှင့် ကပ်ပါးရပ်ပါးပညာရှင်ဆိုသူ များက မြှောက်ပေးသမျှ အကုန် လိုက်လုပ်သဖြင့် တိုင်းပြည်၏ သယံဇာတမှန်သမျှ တက်တက်ပြောင်သည့်ဘဝရောက်ရတော့သည်။
ယခုအစိုးရသစ်ပြောင်း၍ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေပြောင်းပြီ လားဆိုတော့ ဘာမှမပြောင်းလဲ သေးပါ။ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့်နေရာ မှန်သမျှ တပ်မတော်အရာရှိ ဟောင်းများသာ နေရာယူထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တတ်ကျွမ်း နားလည်သည့် ပညာရှင်တွေ ဘေးရောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ တချို့ပညာရှင်ဆိုသူများကျတော့ လည်း မိမိတို့ရထားသည့်မဖြစ် စလောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်လေး၌ သာ ယာပြီး မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက် ဆောင်နေကြသည်။ စီးပွားရေး စီမံကိန်းတွေအမျိုးမျိုး ရေးဆွဲလုပ် ဆောင်နေသော်လည်း အများစု က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ။ နီးစပ် ရာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများသာ ရနေ ကြဆဲဖြစ်သည်။
သည်လိုပုံနှင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဆင်းရဲတွင်းက လွတ်စရာ လမ်းမမြင်ပါ။ တိုင်းပြည်၏ နယ် ပယ်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ တကယ် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေ ဦးဆောင်ခွင့်မရသေးသမျှ တစ်နည်းဆိုရလျှင် လူမှန်နေရာမှန် မဖြစ်သေးသမျှ နောင်နှစ်နောင်နှစ်တွေမှာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး အဆင့် ၁၂ မှ အောက်သို့သာ ထပ်ကျစရာရှိပါကြောင်း စေတနာ ကောင်းနှင့်သတိပေးလိုက်ပါသည်။
7/11/2014 01:30:00 PM articles
7/10/2014 07:28:00 AM articles